ငါလိုအ - ဗီဒီယိုက ချက်တင် တရုတ်နိုင်ငံ
ဗီဒီယိုက ချက်တင် တရုတ်နိုင်ငံ
တွေ့ဆုံစိမ်းတရုတ်မိန်းကလေးများယောက်ျားဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံတွင်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံကျပန်းစိမ်း။ ဧည့်စကားပြောတရုတ်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊စကားပြောကျပန်းစကားကလူကိုတရုတ်ဧည့်စကားပြောဒါင္းချက်တင်နှင့်အတူတရုတ်လူမျိုးစကားပြောဖို့တရုတ်ဧည့်ဗီဒီယို၊တရုတ်မိုဘိုင်းချက်တင်၊တရုတ်နိုင်ငံအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ၊စကားပြောတရုတ်လူမျိုး၊တရုတ် ကိုချက်တင်၊တရုတ်စကားပြောနှင့်အတူစိမ်း၊ တရုတ်နိုင်ငံဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊တရုတ်ဖုအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအတွက်တစ်ဦးတစ်။ ဤသည်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုချိန်းတွေ့အခြားရွေးချယ်စရာအဖုအဖုနှင့်အတူစကားပြော။ သင်မည်သူစိမ်းရပ်ရှိသမျှကျော်ကနေဒီကမ္ဘာတိုက်ရိုက်မျက်နှာချင်း။
ဆိုရင်အိုကေနှင့်အတူအစည်းအဝေးအာရှသောသူယောက်ျားတွေအမှန်တကယ်အသက်ရှင်သောအာရှတိုက်မှာ၊သင်ဟန်ဆောင်နိုင်ပါ၊ကြောင်းသင်တရုတ္၊ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရှေ့အာရှဘာသာစကား။ အမဆိုအဲဒီဘာသာစကားရှိပါတယ်လမ်းကိုပိုနာက္ထပ္သင္ယူဗမာအထက်ရှိဗမာပီသင္ယူဤဘာသာစကား၊ဒါကြောင့် သင်ရရှိပါသည်လမ်းပိုပြီးဝယ်လိုအားအတူလူတို့အဘို့သင်တို့အထက်ရှိထောက်ပံ့ရေး(ခင်ဗျားမှာမြန်မာဘာသာ)။ ကြိုးစားသုံးဘာသာစကားတစ်ခုလဲလှယ်ဆိုက်ကဲ့သို့ သို့မဟုတ်။ ဘူးပင်လိုအပ်ပြောဆိုရန်အခြားဘာသာစကား။ အများစုဗမာပီသင္ယူခြားဘာသာစကားများမှာကြောက်မက်ဘွယ်သော၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲဆိုး၏တရုတ်သို့မဟုတ်ဂျပန်သို့မဟုတ်ကိုးရီးယားဖြစ်ပါသည်၊သင်မည်မထင်ကြောင်းမကောင်းတဲ့မှနှိုင်းယှဉ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုကအာမခံနိုင်မှာအနည်းဆုံးသုံးပုံတပုံကိုလူအများ၏အသုံးဘာသာစကားလဲလှယ်ဆိုဒ်များရှိသည်မှာအနည်းဆုံးသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ရဲ့လျှို့ဝှက်စွာရှာဖွေနေအဘို့အရည်းစား'ရည်းစား(တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်)။ တူတစ်စုံတစ်ဦးဟု၊ထောက်လှမ်းရေးလည်းအလွန်ကောင်းလှ၏။ ဒါဟာအများကြီးအင်္ဂါများအတွက်စကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ သင်ပင်ရ၏စာရင်းတစ်ခုလူတိုင်းဟာအွန်လိုင်းအတွင်းမိုင်(ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ထိတ်လန့်)။ ဒါဟာတရုတ်အက္ပ္ကိုဒါကြောင့်အများအားဖြင့်တရုတ်လူမျိုးအသုံးပြု။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာတော်တော်များများကရှိပါတယ်ထွက်ရှိတို့နှင့်အတူရောနှောဖို့အာရှပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ငါရှိသည်တယောက်ကိုအသုံးပြုမှုဟေ့-သောငှါဘယ်မှာအာရှယောက်ျားတွေနှင့်မရှမိန်းကလေးများမှသွား။ ဆိုက် မသတီအကောင်းဆုံးရှာဖွေနေသည်၊ဒါပေမယ့်အခမဲ့ဒါကြောင့်တစ်ပေါင်းသည်။ ရတစ်ချိန်ကနှင့်သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆိုက်နဲ့ဘယ်လိုအရာကပေါ်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အသုံးပြုသူမှသောသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်အသုံးပြုဖြည့်ဆည်းဖို့။ စဉ်းစားသောဤအုပ်စုများ၏လိုဖွယ်ရှိအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတယ်သာပြောနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းသင်အပေါ်အခြေခံပြီးအဘယ်အရာကိုသူတို့တန်ဖိုးနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ ဤအုပ်စုများအမည်အမျိုးမျိုးရှိတန်ဖိုးနေသော်လည်းအားလုံးဖြစ်ခြင်း၏ရေးစပ်ရှ။ အချို့သောတန်ဖိုးထားဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးနေစဉ်၊အခြားသူများကိုဂရုစိုက်ရန်အကြောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်ပျော်မွေ့။ လျှင်သင်အမှန်တကယ်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အများကြီးရှိသည်ရည်မှန်းချက်နှင့်အမောင်း၊အချို့အုပ်စုတူ၊ သို့မဟုတ်ကျောင်းပြုမယ်လို့သင့်အဘို့သာ။ ဒါပေမယ့်အကယ်၍ခင်ဗျားကိုပျင်း၊အစားအတော်ပင်သောသူအမျိုးအစားဂိမ်းသို့မဟုတ်အကောင်းမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြိုင်ပွဲများ၊သွားရှိပါတယ်။
တရုတ်ထိုင်းလူများကအလွန်မကြာခဏဆင်းကြည့်အပေါ်နိုင်ငံခြား။ အမှန်တရားအကြောင်းထိုင်းတရုတ်မိသားစုများအများအားဖြင့်အထက်အဆင့်အတန်း။ ဒါကြောင့်၊ဤမိန်းကလေးများအားဖြင့်ဆင်းကြည့်အပေါ် ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမျိုးမျိုး၏အကြောင်းရင်းများ။ လည်းနိုင်ငံရေးကိုအမှန်တကယ်အကြောင်းပြောဆိုအတွက်ပြည်သူ့ဖိုရမ်။ ဖက်ရှင်အဘို့အချိန်းတွေ့အကြားထိုင်းတရုတ်မိန်းကလေးများသည်ကိုးရီးယား။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကဖက်ရှင်ခဲ့သည်ဂျပန်အမျိုးသားများနှင့်ပင်နောက်တဖန်အၾကာက ဒါဟာ ။ ကတည်းကထိုင်းအမျိုးသမီးများမှာတော့အားလမ်းကြောင်းများနှင့်ဖက်ရှင်သွားမယ့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်။ သင့်အချိန်ဖြုန်းအတွက် ။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အလတ်တန်းစားဧရိယာ။ ငါ့အကြံဥာဏ်ဖြစ်ပါတယ်သွားဖို့ထွက်ဆွဲထားရှိကော်ဖီဆိုင်နှင့်အတော်လေးတည်နေရာကို။ ကြိုးစားတက်စတင်စကားပြောဆိုချက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မကြပ်"ထိုင်းလူမှုရေးဖိအားများ"အပေါ်။ ထိုင်းအထိခိုက်မခံဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များ၏လူမှုဖိမည်ကရှာတွေ့ဖို့ခဲယဉ်း၏ပရောနှင့်အတူအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်နှင့်အစီရင်ခြင်းကိုခံရသည်ထိုင်းလူ။ ဒါကြောင့်တိတ်ဆိတ်တည်နေရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သုံးမည္တူ၊ကင်းထောက်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုသောတည်နေရာကိုတိကျတဲ့နေစဉ်တွင် နေတယ်ဆိုရင်သင်လည်းရှက်လိုလုပ်ဖို့တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်မှု။ သောကြောင့်အဆိုပါအပလီေတည်နေရာကိုတိကျတဲ့ရတဲ့လိမ့်မည်ဖက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအတွက်ဧရိယာ။ ရှက်ဖြစ်ရကြဘူးကြောင်းပြောနေအတွက်အသင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သူတို့လေးမြတ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်အရိုးသားမှုနှင့်ဖြစ်ကောင်းပိုလက်ခံဖို့အတက်တွေ့ဆုံရန်။ အမေရိကန်၏မိတ်ဆွေ သတၱဳတြင္းတွေ့ဆုံမိမိထိုင်း-တရုတ်မယားအတွက်အကော်ဖီဆိုင်ကို။ သူ၏စိတ်ဝင်စားသွားတက်ဖို့တယ္။ အခြားထိုင်းသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေသူအလွန်ပညာတတ်သူမ၏ခင်ပွန်းအတွက်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သူမကယခုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမေရိကန်နှင့်အတူအသက်ရှင်သူမ၏ခင်ပွန်း။ ငါသည်လည်းကြားကတစ်ကိုက်အောင်ကုမ္ပဏီကဖန်နောက်ခံ၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့်ကိုက်ညီ။ သငျသညျပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်အခကြေးငွေပေး၊သူတို့ကိုသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်သင့်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းမတွေ့တစ်ဦးပွဲစဉ်များအတွက်။ ဒီအဖြစ်အခြားလမ်း။ အမျိုးသမီးများအလွန်အားကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ယဉ်ကျေးမှု၊သင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့်အခါ၊သူမအနိုင်နိုင်သိသင်မှာအားလုံးထံမှချိန်းတွေ့အပျက်(တကယ်တော့၊လျောက်ပတ်သောအမျိုးသမီးယေဘုယျအားဖြင့်မတက်ရောက်ချိန်းတွေ့ပွဲ)။ သင်ရတယ်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သူမသည္သူမကိုသူမ၏အားဖြင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ၏အမျိုးမှစတင်မည်သည့်ပုံစံ၏။
တရုတ်လူမှုမီယံဖြစ်ပါသည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လျှောက်လွှာအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ။ တရုတ်လူမှုအကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတရုတ်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအတူတူ၊သူငယ်ချင်းများပါစေနှင့်တွေ့ဆုံတရုတ်တစ်ဦးတစ်။ ရှာဖွေလှုပ်ရှားမှုမိတ်ဖက်၊သူငယ်ချင်းများ၊အေးမြသောနေ့စွဲသို့မဟုတ်အရစာန်၊ေပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်ဆက်ဆံရေး။ ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာအွန်လိုင်းကွန်မြူနတီဘယ်မှာသင်ဖလှယ်နိုင်ပါဗီဒီယို၊ချက်တင်နှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူနယူးတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်။ တရုတ်လူမှုအသုံးပြုသူဖော်ရွေသည်ႏိုကူညီပြီးပြည့်စုံသောအိမ်ထောင်ဖက်သင်အနီး။ ဘာကိုတရုတ်လူမှုထူးခြားသည်ဤဖြစ်ပါသည်:သငျသညျဖြည့်ဆည်းနိုင်လူတို့ကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှု၏။ လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံ၊သူငယ်ချင်းများ၊ချက်တင်၊လူမှုရေး၊နှင့်ပင်ချိန်းတွေ့ခဲ့ဖူးကြောင်းပျော်စရာ။ အခြားကွန်ယက်ကျနော်တို့ဗီဒီယိုလက္တံေ။ သူတို့ပြောတဲ့ပုံကတထောင်စကားများရကျိုးနပ်နှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုသည်အနည်းဆုံးထောင်။ ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့ဗီဒီယိုအခြေပြုလူမှု အက္ပ္ကိုကြောင့်ဖျောပွနိုငျကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျနှင့်အတူဗီဒီယိုနှင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပစေခြင်းငှါ။ အရမ်းရှက်တင်အ။။။။။ ကျနော်တို့ဓာတ်ပုံများလွန်း၊ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုကိုအများကြီးပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ။ ဘူးတီကဲ့သို့ခံစားရမှာရှာဖွေနေဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများလူများနှင့်တစ်ဦးတစ်။ ထိုအခါဝယ္ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအခန်းပေါင်းနှင့်အမည္လူအနီးအနားသို့မဟုတ်တခြားအချိန်မှာကွာ။ ချက်တင်နှင့်အတူဒေသခံပြည်သူများသို့မဟုတ်ပူးပေါင်းကမ္ဘာစကားပြောခန်းနှင့်ချက်တင်နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ချစ်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့၊မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်အရက်စွဲတစ်ခုရှာတွေ့မှထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူယနေ့ည။ ၎င်း၏့။ သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အားဖြင့်အမြင်ဗီဒီယိုကလစ်၏တစ်ဦးတစ်ယောက်သောအခါသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့သင်တို့အိမ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူတို့ကြိုက်လျှင်သင်ပြန်၊ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်နှင့်သင်တို့၏နှစ်ဦးစလုံး။ ကူညီချင်ရေခဲကိုချိုးဖျက်။ သူတို့ကိုစေလွှတ်မည်'မင်္ဂလာပါ'။ သငျသညျပေးပို့နိုင်ပါတယ်န့်အသတ်ကိုသတင်းစကားများ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများမှအသီးအသီးအခြား။ ရှာဖွေရက်စွဲတစ်ခု၊အစည်းအဝေးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊စကားပြောချိန်းတွေ့ဒါလွယ်ကူသောဘူး။ နှင့်အားလုံး၏အကောင်းဆုံး၊၎င်း၏့။ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တွဲစကားဖော်ပြရန်အတွက်ဂိမ်းများလီေ၊သင်ကူညီဖို့ဒီဂိမ္းမ်ားႏွင့္အက္ပ္မ်ားခံရ ပိုပေါ်ရှိအခြားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့အသုံးပြုသူများ။
လျှင်သင်၌ရှိကြ၏ကိုရီးယား၊လာနှင့်ပူးပေါင်းကလပ်အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အများကြီးရှိပါတယ်ယောက်ျားတွေကိုရီးယားမှာနေသောနှင့်ဖော်ရွေ။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သင်အမြဲသွားဖို့အစည်းအဝေးတွင်ရီးယားသို့မဟုတ်ကိုးရီးယားလျှောက်လွှာလက်ခံအစည်းအဝေးတူစကားလက်ဆုံအတွက်၊သင်မသိဘူး။ ငါပြီးသားအစည်းအဝေးတွင်ကိုးရီးယား၊မှတ်သား"ကိုးရီးယား"ပါ။ ရှိလိမ့်မည်ဟုလည်းအများကြီးအတွက်တ၊သို့သော်၊အဘယျသို့ပြောကြမလဲဗျာ။ ကြိုးစားနိုင်ပါကဗီဒီယိုဗားရှင်းကတည်းက၊ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်၊တိုက်ရိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်။ ငါအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုရီးယားမိန်းကလေးများအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုရီးယား၊ကျွန်တော့မျက်လုံးကိုကြည့်ပျက်ကွက်။ ငါအနည်းငယ်၊အကြောင်းဒါကြောင့်အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်င်နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသောလူအမြင့်၊အလေးချိန်၊ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများ၊စသည်တို့ကို။၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစဉ်းစားကြဘူးကိုးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ရုံမျှတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒေသများ။ လူတွေကမကြာခဏ အန္တရာယ်ဖန်တီးခြင်းအဖြတ်ထုတ်မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကူးယဉ်၊ဆိုလိုတာကသင်မမြင်နိုင်ပါဘူး၊ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ရှေ့အပေါ်သင်တကယ်ရှိပါတယ်။ သို့သော်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေသင့်၊ကိုက်နှင့်ယုံကြည်ကြောင်းတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်ဖြစ်ခြင်းကိုးရီးယား၊ကျွန်မစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကအတာင္ကိုးရီးယား။ ဒါဟာအပြည့်အဝဖွင့်ဘူးမ်ား၊အချို့အဝက်၏သူတို့ကိုအမျိုးသားများအတွက်၊နှင့်သေချာပါတယ်တစ်ချို့အဆောက်သူများကိုစဉ်းစားအဖြစ်ရနိုင်။ သင်တို့ထံသို့သွားလျှင်၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤရွေးစရာတခုမဟုတ်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်အသင်းနှင့်ကိုရီးယားဘာသာစကားဧရိယာ၌။ ဘူးမ်ား၊နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားဒေသများ၊အလေ့အဆုိးအသင်းတော်၌ကိုရီးယားမှာ။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးမဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်ကိုးရီးယား၊သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိမြင်ရအတွက်ဆား၊ငရုတ်ကောင်း။
ဘယ်လိုပြောပြရန်ပေါ့ပေါ့ချိန်းတွေ့အလေးအနက်။ အဲဒါမျဉ်းကြားရုံချိန်းတွေ့နှင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်အကြောင်းကိုလေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေး။ စကားမစပ်၊အမျိုးသားများအဘို့အဆင်သင့်မဟုတ်ကတိကဝတ်အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့အမျိုးသမီးများမှာ။ လူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒါဟာသူတို့မကြာသေးမီအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးအကြောင်းသူတို့ကိုထိခိုက်နာကျင်လွန်။ သို့သော်၊ကျယ်ပြန့်အများစု၏ယောက်ျားတွေရတီဆုံးရှုံးချင်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်။ သူတို့ကြောက်နေကြတယ်မိမိတို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အမည်ပြောင်းအတွက်အလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းမသည်သူတို့အဘို့အလမ်း။ ဤအချက်တွင်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်မိမိတို့အ။ ဤအခါကာလပါဘူးတီလိုရှုပ်ထွေးသူတို့၏အသက်တာအားဖြင့်ခံရအလွန်အလေးအနက်။ သူတို့ကကိုယ့်အတွက်အပျော်အပါးနှင့်တီလေ့ကြောင်းထင်စေခြင်းငှါသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အရာတစ်ခုခုကပိုပြီးသိသိသာသာ။ စဉ်အမျိုးသမီးဝေမျှခံစားရန်အချိန်နှင့်အတူလူတစ်ဦး၏၊လူမသန်အကြောင်းပေးခြင်းအားလုံးသည်၎င်းတို့၏အခမဲ့နာရီအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ သူတို့အဆင်သင့်မဖြစ်ဖြုန်းဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်နှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးကြောင့်သူတို့လိုအပ်အဘို့ထိုသူတို့ရရှိတခြားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အသက်တာ၌။ သိသိသာသာ၊အမျိုးသားများအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ရပ်တည်ချက်အပေါ်အခိုင်အခြေရှေ့တော်၌သူတို့အခြေချ။ အခုစေဖၚျပေါ်ရွှေ့ဖို့အဲဒီလူဘယ်သူတည်စေပြီသူတို့ဘဝနှင့်ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး။ ဒီနေရာမှာအများဆုံးအကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရိပ်လက္ခဏာများသင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ဖြစ်လာပို။ မရှိအဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ သင်နားလည်သဘောပေါက်သောအမှုအရာရဖို့ပိုပြီးအလေးအနက်လျှင်သင်သည်သက်သာခံစားရနှင့်အတူ။ ၎င်း၏အကြောင်းအဆင့်နှစ်သိမ့်သောသူစုံတွဲများဘာသာျပန္ခ်က္နေထိုင်ခဲ့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်မပြေသင့်အဘို့အနှစ်ခုတော့ဘူး။ သင်ခံစားရလုံးဝအိုကေတွင်ထိုင်အခန်းတခန်းလုပ်နေတာ၏ကိုယ်ပိုင်အမှုအရာ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သူမအဖတ်၊သင်အဆုံးအရာတစ်ခုခုအပေါ်သင့်ရဲ့လက္ပေ(ဤသည်လျှင်သင်ပြီးသားအတွက်အတူတကွနေထိုင်)။ သို့မဟုတ် ၎င်း့သားမလိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုရန်အရာတစ်ခုခုအဖြစ်သင်လမ်းလျှောက်လက်:သင်တီလိုစကားခံစားဖို့အသီးအသီးအခြားကုမ္ပဏီ။ သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှု-ကုန်းများမှာလှုံ့ဆျော။ လျှင်သင်ရက်စွဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပါအဝင်မပါဘဲသူမ၏အစီအစဉ်များအတွက်အနီးဆုံးအနာဂတ်၊သိသာကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသို့သူမနှင့်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ကြီးသို့တယ္။ မထားဘူးဆိုရင်တီအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့လူ၊သင်တုံ့ပြန်မည်မဟုတ်သောသူတို့၏သတင်းစကားသို့မဟုတ်ခေါ်ခြင်း၊သူတို့ကိုကျောဒုတိယသင်တို့ကိုတွေ့မြင်သင်လွဲချော်င်းတို့၏။ သင့်ရဲ့ျပါဘူးသောအခါ၎င်း၏့အတွက်အဆင်ပြေသည်။ အခြေအနေကွဲပြားခြားနားသည်အခါသင်အလေးအနက်ကတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်သင့်နောက်ထပ်ဆက်ဆံရေး။ ဤအမှု၌၊သင်တုံ့ပြန်မယ်တူတဲ့အမဲဆီလျှပ်စစ်။ အဘယ်သူမျှမကပိုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ဖိ။ ပါကရက်စွဲများရပါတီတွှေရန်နှင့်သင်ခံစားရမှာလုံးဝငြိမ်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူ၊သင်ဘာသာျပန္ခ်က္ရှိရာအမှတ်ရောက်တဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်။ အလေးနက်၏ဆက်ဆံရေး၏ဖုံးကွယ်နောက်ကွယ်မှကြောင်း နှင့်နှစ်သိမ့်သင်ခံစားရမွာပါ။ ဒါဟာအသံနိုင်ပါသည်အရှေ့၊သို့သော်ဤသည်အမှန်တကယ်အချိန်၏နိမိတ်လက္ခဏာ၊ တစ်ခုခုနက်ရှိုင်းနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးသောသင်တို့ကိုနှစ်ဦးအကြား။ အဘယ်သူမျှမကပိုအရှက်။ အလားတူအဖြစ်အဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေပျောက်ကွယ်မှသင်၏ဆက်သွယ်၊ဒါကြောင့်ပြုအားလုံး၏အမျိုးအရှက်။ သင်မႈအကြောင်းအများကြီးပုံကိုကြည့်ရှု၊နှင့်တီဖို့ကြိုးစားဟန်ထက်ပိုကောင်းသင်အမှန်တကယ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ရီစရာဥပမာ၊သင်မူကားနောက်တဖန်ရှက်ဖြင့်ကိုယ်တော်၏ဆင်းရဲသားဓာတ်ပုံများကိုရှိသည်ဘယ်မှာဝက်ပိတ်၊မျက်စိသို့မဟုတ်သူ၏အခြားခါတိုင်းလိုမော်ကွန်းပျက်ကွက်ကြောင်းဖြစ်ပျက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရစဉ်ရှိခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများကိုယူ။ တူညီတဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ:သူမကမပါလျှင်တီသိကသူမနံနက်အမွတ္-မိတ်ကပ်ကြည့်ရှု၊သင်ဘာသာျပန္ခ်က္ရောက်ရှိသောအဆင့်အဘယ်မှာရှိသင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအရာတစ်ခုခုအတွက်အလေးအနက်။ သင်တွေ့ဆုံအသီးအသီးအခြားမိသားစု။ အများဆုံးထင်ရှား၏နိမိတ်လက္ခဏာအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသည်အစည်းအဝေးတစ်ခုချင်းစီ၏အခြားမိဘများ။။။။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊လူအတီမိတ်ဆက်ပေးသူတို့ရဲ့ရက်စွဲများသူတို့ရဲ့မိသားစုများ၊မဟုတ်လျှင်၊သူတို့သိကတစ်ခုခုရဲ့အနက်အရှည်လျား-တည်။
တရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ရက်စွဲတရုတ်မိန်းကလေးများသည်တရုတ်နိုင်ငံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်-ဆွဲဆောင်တရုတ်အမျိုးသမီးလုိက္သနည်းလမ်းများစွာအတွက်ဖြစ်ဆွဲဆောင်အခြားအာရှနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများ။ ပထမ၊စဉ်းစားမီ တဲ့တရုတ်သမ္မတ၊သင်ဖော်ရွေမှု၊ယုံကြည်မှု၊နှင့်အထက်အားလုံးလွယ်ကူမယ့်။ တကယ်တော့၊အတန်ငယ်အရံသဘာဝတရုတ်မိန်းကလေးများနှင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်အခမဲ့နှင့်အထင်အရှားကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်များ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်ဒါကြောင့်လွယ်ကူချိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ကိုမဆိုနဲ့သင်ဖန်စီ။ ဒါပေမဲ့သင်တွေ့လိမ့်မည်ဒါကြောင့်ခက်ခဲတက်ချိတ်နှင့်အတူတရုတ်အမျိုးသမီးများလည်းမိမိတို့၏ယောက်ျားတွေဆိုရင်ကောင်းမရှိခြင်း၏ထုံးစံ။ ကြာဘာမှမရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့အတွက်တရုတ်နှင့်အားလုံးစတင်သည်သည့်အခါသင်ယူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်အနီးကပ်သူတို့ကိုမည်သည့်အကြောင်းသင်ဖန်စီ။ သိရန်ရတဲ့တရုတ်မိန်းကလေးများသည် တူရေခဲကိုချိုးဖောက်လျှင်၊ဒါကြောင့်မနည်းဗျူဟာ၏ချဉ်းကပ်မှုအတွက်သင်ရှာစေခြင်းငှါအလွန်ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်ခက်ခဲသည်။ တရုတ်ရှိပါတယ်ဟာသတစ်ခုဥာဏ်ကောင်းသော;တပည့်နှင့်၎င်းတို့၏ဧည့်ဝတ်များမှာချို။ သို့သော်၊တရုတ်မိန်းကလေးများအစဉ်အမြဲရှက်တတ်နှင့်တိတ်ဆိတ်သင်စျေးပေါတက်ချိတ်ဖို့သူတို့ကိုမဆိုနဲ့မပါဘဲ။ သော်လည်းအရူးလုပ်မထားပါနဲ့အားဖြင့်တရုတ်ငြိမ်သက်၊သင်တွေ့ဖို့ခဲယဉ်းတံခါးသို့သူတို့ကိုငါတစ်ဦးဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်တညဉ့်ရပ်တည်ချက်။ အခြားအဆင့်ကထိုက်တန်ကိုဖော်ပြထားသည်ဘယ်မှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်တရုတ်မိန်းကလေးများ။ ရှိပါတယ်သောင်းချီလူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသူတို့ရှိသည့်နေရာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာတရုတ်မင်းသမီး၏ဤကအားလုံးကိုရှိပါတယ်ကဲ့သို့ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့တရုတ်စကားပြောခန်း။ တန်ချိန်ရှိပါတယ်လှပတဲ့တရုတ်မိန်းကလေးများ။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့။ ခရစ်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းတစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းအများလာရောက်လည်ပတ်သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်နိုငျကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူစကားပြော။ အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နေရာချထားရန်တရုတ်မိန်းကလေးများဗီဒီယိုအပေါ်ချိန်းတွေ့ပလက်ဖောင်း။ဒါကြောင့်၊သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ထိုးဖောက်နှလုံး၏တရုတ်မိန္းကေလးသို့မဟုတ်တောင်မှသူတို့ရဲ့ယောက်ျားထိုအခါသင်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့တရုတ်စကားပြောခန်းဝက်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေဖို့သူတို့ကိုအများကြီး။.
တရုတ်ချိန်းတွေ့သလိုရှုပ်ထွေးပြီးအံ့သြဖွယ်အဖြစ်အခြားမည်သည့်အမျိုးအစားချိန်းတွေ့၏။ ေ၊အလိုလိုအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနိုင်အောင်တစ် သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပိုမိုအားကောင်း။ ေတရုတ်ချင်သူလူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခြားသူများထံမှတူညီသောတိုင်းရင်းသားနောက်ခံ၊အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကိုကူညီနိုင်။ အဖြစ်နှင့်အတူမည်သည့်ယဉ်ကျေးမှု၊လူတိုင်းမှတရုတ်နိုင်ငံအစုရှယ်ယာတူညီသောယုံကြည်ချက်။ ဆဲ၊အချို့သဘောထားကြောင်းချိန်းတွေ့အကြောင်းကြားဘုံသောတရုတ်။ အရေးတိုင္ မိသားစု။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၊ကျနော်တို့ကဖို့အသုံးပြုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကကျနော်တို့နေ့စွဲနှင့်အဘယ်သူကျွန်တော်တို့လက်ထပ်။ ဒါပေမယ့်အစဉ်အလာတရုတ်မိသားစုများ၊မိဘစေခြင်းငှါမျှော်လင့်ရှိသည်။ ကိစ္စများကမကြာခဏပေါ်ပေါက်လာကြပါဝင်သည်:သင်ဖို့ချည်နှောင်လျက်င်ရနှောင့်ရှက်သို့လျှင်သင်ယူဆတဲ့အတွက်အားလုံးကိုတရုတ်၊ချိန်းတွေ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တွေ့ဆုံရန်သောသူလူမမွေးဖွားခဲ့ကြသည့်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်နေထိုင်ခဲ့ဖူးဘူးတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊ဒါပေမဲ့သူနေဆဲနောက်သို့လိုက်အစဉ်အလာတရုတ်ယဉ်ကျေးမှု။ ကိုလည်းသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတွေပြောင်းရွှေ့ဒီမှာအရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ဒါပေမယ့်လုံးဝအဆင်ပြေနှင့်အတူအမေရိကန်စတိုင်။ နှင့်သင်တန်း၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာ၌အကြားအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ အဘယျသို့ကြောင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှိကြောင်းကယ့်ကိုမဖွင့်၊မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအရာကဲ့သို့'ချိန်းတွေ့။ 'အဖြစ်နှင့်အတူမည်သည့်ချိန်းတွေ့အခြေအနေ၊အကြောင်းသိရန်ရတဲ့ထူးခြားတဲ့လူတစ်ဦး၊သူတို့ရဲ့အလားအလာအပေါ်အသက်တာနှင့်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွား၊မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အိပ်မက်များ။ သင်၌စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်စည်းအဝေး၏လူတရုတ်နောက်ခံအရောင်၊သငျသညျအများအပြားရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အသက်ရှင်သူသည်လူများအတွက်လူမ်ိဳးတူကွဲပြားသောမြို့ကြီးများစွာရှိလိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းတွေကို တွေ့ဆုံစကားပြောနေသောလူများနှင့်တရုတ်သို့မဟုတ်တရုတ်-အမေရိကန်။ အကယ္၍အသိုင်းအရပ်မဟုတ်အများအပြားအာရှနေထိုင်သူများ၊အင်တာနက်ကိုကူညီနိုင်။ ပို၊ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုဒ်များကိုဆက်ကပ်အခွင့်အလမ်းများအတွက်တရုတ်ချိန်းတွေ့။ ရှိသုံးခုအဓိကအမျိုးအစားများတရုတ်ချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များ:အပြားအမေရိကန်အမျိုးသားများအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်ဖို့အာရှအမျိုးသမီး။ ဒါပေမယ့်အများအပြားတရုတ်-အမေရိကန်အမျိုးသမီးတူညီတဲ့အစုုိးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေသောအမျိုးသားများချိန်းတွေ့။ သူတို့ငြီးငွေ့ဖြစ်ခြင်းကိုကဲ့သို့ဆက်ဆံ'တရုတ်ရုပ်၊'သို့မဟုတ်အဆိုးမြင်မှိုင်းသောသူတို့'ထူးခြားဆန်းပြားအသီး၊နှင့်အချက်ကိုကြောင်းလူအချို့ထင်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားသူတို့ထက်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲ။ ရှိရန်တစ်ဘုံအဆကတရုတ်အမျိုးသမီးဖြစ်ကြသောထိုသူ၏။ အများစုကတရုတ်-အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်ပျက်အားဖြင့်ဤစိတ်ကူး။ ကြောင်းပြောမယ့်အကြောင်းရှာနေတဲ့လူအတွက်တစ်ဦးထူးခြားဆန်းပြားသို့သော်နာခံမှုရှိ မေတ္တာကိုမတှေ့နိုငျနှင့်အတူတရုတ်အမျိုးသမီး၊ကိုယ့်အကြောင်းကလွယ်ကူမယ့်ငွေကိုရေတွက်နိုင်လျှင်သင်ကြတာပါလမ်းညွှန်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ကြိုးစား။
ပေးတော်မူသောအမျိုးသမီးများပြင်ပသူတို့ရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲအစဉ်အမြဲဒီလိုလုပ်ဖို့မလွယ်ကူပါ။။။။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအများစုမှာအမျိုးသားများနေထိုင်သည့်ဧရိယာ၌အဘယ်မှာဒါဟာအများအားဖြင့်ဝိုင်းရံအမျိုးသမီးများက၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထံမှ။ ဘယ်မှာပေါ်မူတည်နေတယ် နေထိုင်နေကြစဉ်၊ရှာဖွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးမိန်းကလေးများကိုဖြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနိုငျအနည်းငယ်ခက်ခဲ။ ဤအကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဖို့တွေ့တဲ့မိန်းကလေးကကိုးရီးယားအတွက်ပျော်စရာနှင့်လှပစွာ၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊နှင့်အတူအဘယ်သူတည်ထောင်ရန်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အလုပ်လုပ်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲကြောင်းထွက်ရှာဖို့အမိန်းကလေးတစ်ဦးသည်ကိုရီးယားနှင့်သူမ၏အိပ်မက်။ ကိုရီးယားကုန်စုံစတိုးဆိုင်နိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်၏သက်သာဇုန်ထဲကထွက်သင့်တူချက်ပြုတ်။ သင်ဖြစ်နိုင်မတူအလွန်အကျွမ်းတဝင်ရီးယားဟင်းလျာဆိုရင်သင်ကြိုက်အများဆုံး။ တကယ်တော့၊သင်စေခြင်းငှါမဘယ်လိုပြုတ်ဖို့ရေအိုးတလုံး။ ဒါပေမယ့်အဘို့ရှာကြသည်လျှင်မိန်းကလေးများ၊ကိုးရီးယားအလှအပ၊ထို့နောက်သူကကိုတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်တဦးနှင့်အတူပိုပြီးတစ်စတုရန်းပေလျှင်။ အဆုံး၌၊အရာအားလုံးကိုဝင်စျေးဝယ်ခြင်း၊အားလုံးမှန်တယ်။ ရွာေဖြကိုရီးယားဘာသာစကားစတိုး၊ဇိမ်ခံသင်အနီး၊သွားနှင့်အချို့သောသင်သည်သင်၏စျေးဝယ်။ လျှင်သင်သာတစ်ဦးစွန့်စားမှုထမင်းစားခန်း၊ပင်လျှင်အကန့်သတ်ရန်ပြင်ဆင်ထားအစားအစာကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့သိရပါဘူး သို့သော်၊သင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ကြောင်းအရာအချို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖို့ကြိုးစား။ လျှင်သင်ကံကောင်းများမှာ၊သငျသညျအစရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အပူကိုရီးယားမိန်းကလေး၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သင်၏စုံတွဲတစ်တွဲအမှုအရာအကြောင်းကိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်၊ကိုးရီးယား။ ရှင်ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောသူယားယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူအားလုံးအတူတူ။ အောက်ခြေလိုင်းအစည်းအဝေးမှာကုန်စုံစတိုးဆိုင်၊ကိုးရီးယားနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးတွင်အိမ်ရှင်၏အခြားသောအရပ်နိုင်၊ဒါပေမယ့်လုပ်နေတယ်အွန်လိုင်းကအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသင်တို့အဘို့အ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အားလုံးအကောင်းဆုံးဆိုဒ်များရှာတွေ့မှမိန်းကလေးများကိုရီးယားမှာ၊သူတို့ကရှိပြီးအကောင်းဆုံးအဘို့အတော်လေးအချိန်အတန်။ အခါသင်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုး ရှင်(သငျသညျအထဲကစစျဆေးနိုငျဒီနေရာမှာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေး)၊သင်ချက်ချင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသောအမျိုးသမီးရှာဖွေနေများအတွက်ယောက်ျားတွေနဲ့တူ။ ငါသည်လည်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်စျေးကွက်အတွက်အမျိုးသမီး၊သင်ကံကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အဖြစ်ဖော်ပြထား၏လူငယ်အမျိုးသမီးနှင့်အထိုင် ။ ချိန်းတွေ့၊ၡမ်ားဘူးမ်ား၊စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ဧကန်အမှန်ဖြစ်နိုင်၊ဒါပေမယ့်အသုံးပြု။ အသက် လိမ့်မည်ကျိန်းသေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်း။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်မိန်းကလေးများအတွက်ကိုးရီးယား၊ထို့နောက်မှသာသင့်လျော်မိန်းကလေးများအဘို့အရှာကြသည်အချို့တိုင္းရင္းသားအစားအစာ။ ဒါပေမယ့်ယောက်ျားကြပါဘူးတဲ့သူတွေအများကြီးချက်ပြုတ်ချင်ကြပါဘူးသွားဖို့ကုန်စုံစတိုးဆိုင်နှင့်အတူထုပ်ပိုး။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတွေ့ဆုံရန်ကြီးကိုနေရာမျိုးသမီးများ၊အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သူတို့ထိုင်ခုံဧရိယာအဘယ်မှာရှိလူအများအားဖြင့်စုသိမ်းမီနှင့်အပြီး။ ရှာဖွေနေရတဲ့အခါကိုရီးယားမိန်းကလေးကြိုးစားရှာဖွေနေအတွက်ပိုပြီးခေတ်မီစားသောက်ဆိုင်၊လူအစုအဝေးသည်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်။ အမျိုးသမီးအဘို့အရှာဖွေနေမဖြစ်စေခြင်းငှါအတွက်မြို့လယ်။ သောအမှုဖွင့်လိုလျှင်၊သူမမှာရှိအုပ်စုနှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊သို့မဟုတ်အချို့အခြားအမျိုးအစား၊နှင့်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်မှပြောနေတာကိုစိတ်ဝင်စား။ ဟိုတယ်ဘား၊ကရနေရာတစ်ခုကြီးအမျိုးသမီးများ၊နှင့်ရှိသည်သောသူတို့အဘို့လုံလောက်တဲ့ပိုက်ဆံတစ်ခရီးစဉ်တွေမှာရွှေ့ဖို့ထွက်။ လျှင်သင်၏ရှာဖွေရေးအတွက်မိန်းကလေး၊အခွင့်ကောင်းလည်းမရှိထွက်ရရန်တစ်ခုတည်းသောအကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါအဆိုပါဘားကဆွဲဆောင်အများစုဟာလူငယ်လူ၊။ ရှာဖွေနေရတဲ့အခါကိုရီးယားအမျိုးသမီးများအတွက် အစည်းအဝေးဖို့ကြိုးစားကြိုးစားမှာဟိုတယ်ဘားဒေသများရှိသောများသောအားဖြင့်ပြည့်စုံနှင့်အတူလူအစုအဝေးများ၏တောင်ကိုးရီးယားလူမျိုး။ လျှင်သင်အသက်ရှင်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြို့အတူလော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊နယူးယောက်နှင့်ချီကာဂို၊ထို့နောက်ထိုသို့ပြု။။။။ ဟိုတယ်ဘားသင့်တော်လေးလွယ်ကူသည်၊နှင့် သူတို့ကအစအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်။ မင်္ဂလာရှိအချိန်နာရီသည်ကြီးစွာသောနေရာအတွက်လူငယ်အမျိုးသားများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလုပ်လုပ်ယားမိန်းကလေးများနိုင်သူဖြစ်သူတို့ကိုယ်ရံတော်မှာရှည်လျားတစ်နေ့ပြီးအရုံး။ ကိုယ့်အတွက်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်၊ဟိုတယ်ကြည့်ရှုသင့်အဘို့အမင်္ဂလာရှိအချိန်နာရီဒေသများအဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းအဓိကအားဖြင့်အာရှတိုက်တွင်သို့မဟုတ်ယား။ သွားနေတယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်နာရီ၊သေချာအောင်သင်ဝယ်ဖို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအချိုရည်။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကော့တေး၏အညဦးဖြစ်လိမ့်မည်ညစာစားပွဲနှင့်ဒုတိယအစည်းအဝေး။ လျှင်သင်မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်းပျော်ရွှင်နာရီ၊သေချာအောင်သင်အဆင်သင့်မဝယ်ဖို့တစ်စုံတွဲအချိုရည်။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကော့တေး၏အညဦးဖြစ်လိမ့်မည်၊ညစာအတွက်ဒုတိယအစည်းအဝေးမှာ။ ဟိုတယ်တွင်တည်ရှိသည်တစ်ဦးသိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုးရီးယားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ဒါပေမယ့်လည်းအကြောင်းအရာတစ်ခုခုလူအများစုဟာပြုပါသင့်တယ်၊နှင့်အာရုံစူးစိုက်နေ့ကိုတလျှောက်လုံး။ ကော်ဖီဆိုင်များပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာထဲမှာ၊ကင္မ္ခ်ီအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများမှာ။ သော်လည်းထိုင်-ကဆင်းကော်ဖီဆိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အတိအကျသူတွေကိုသူတို့အတွက်အသုံးပြုကြသည်၊ဤသူအချို့၏အဓိကကွာခြားချက်။ အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ကတော့စျေးနှုန်းတွေကိုယေဘုယျအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူထွက်လာကြတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါၿပီ၊အရာအလွန်အားပေးအားမြှောက်။ မကြောက်ပါနဲ့သွားစခန်းအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်၊သို့မဟုတ်နှင့်အတူအပြည့်အဝအရှည်တစ်ပုဒ်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထားအလှပြီးသင်လမ်းလျှောက်တံခါးကိုအားဖြင့်၎င်းတို့၏လတ်နှင့် ။ မအားလုံးမိန်းကလေးများရီးယားမှာစျေးဝယ်သွားလို၊ဒါပေမယ့်စျေးဝယ်စင်တာများဖြစ်ရမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောနေရာအတွက်အစည်းအဝေးနှင့်ဆွေးနွေးပွဲ။ အားလုံးလူငယ်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်ကိုရီးယားကျန်ကြွင်းရသင့်အတွက်စျေးဝယ်စင်တာနှင့်အတူဒေသများရှိကြီးမားတဲ့အာရှလူဦးရေ၊စျေးဝယ်စင်တာများလည်းဖြစ်တယ္ဆိုေမိန်းမတို့အဘို့။ ယူသည့်အခါအမျိုးသမီးပွင့်ကုန်တိုက်မှသေချာအောင်၊သင်သွားဖို့စတိုးဆိုင်အထိုသို့ပြုမှ အားလုံးအတွက်အမျိုးသမီး။။။။ အနည်းဆုံးလုပ်ချင်တာအနည်းငယ်များအတွက်စျေးဝယ်။ ဆိုင်မတွေ့ရှိနိုင်လမ်းထောင့်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြု၊ဒါပေမဲ့သူတို့တည်ရှိနေဆဲ၊သူတို့များသောအားဖြင့်အလုပ်များမျိုးသမီးအမတ်နှင့်ၡမ်ား။ ရှာဖွေနေသည့်အခါ၌ကိုရီးယားဘာသာစကား၊ကိုစျေးဝယ်သွား၊ဤအဘို့စိတ်ကူးတစ်ခုအနေနဲ့အက်ဆေး၌အထွေထွေ၊ေပ်ာ္ရႊင္စတိုး၊ဒါကြောင့်အနည်းငယ်အဆင်မပြေလျှင်သင်တို့အဘို့သင်တို့မတတ်ဘူး။ အဲဒီအစား၊သင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဆိုင်သောဝတ်ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကို၊အတစ်တန်ရှိသည်၊ကွဲပြားခြားနားသောလူတို့မှာတစ်ပေးထားသောအချိန်။ မကျေနပ်အချို့မိန်းကလေးများထိုင်ၥဳမှာမိန်းကလေးမှာအချိန်မှဆင်းသက်လာသောအုပ်ဆိုင်၊ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေတွေ့ဆုံရန်ကြီးကိုနေရာအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဒါဟာအစနဲ့တူပုံမရပါဘူးမပါဝင်သာဝင်၏စုံတွဲတစ်တွဲမှအမျိုးသမီး၊အဆိုေဆိုင်များမှာအဆိပ်နွေးထွေးများအားလုံးရေးသားပြီးလူချင်းတိုးတက်လာဖို့ချင်သူ။ သင်ရှာလိုလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက်စာအုပ်ဆိုင် (အထူးသဖြင့်ကြီးမားတဲ့တဦးတည်းသောသိမ်းထားဖို့အခန်းကဏ္ဍဘယ်မှာသင်ယူနိုင်တစ်ခုခုကနေစာအုပ်စင်ပေါ်အပေါ်။ ငါချင်ကြပါဘူးအတက်အဆုံးသတ်ဖို့ပြောနေတာကိုရီးယားနှင့်အနုပညာကိုနှစ်သက်လျှင်သင်ဆဲကြပါဘူးငါသိ၏ပဉ္စပီ။ အဆိုပါအားကစားရုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးထင်ရှားသောနေရာများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးများ၊သို့သော်အမှန်မှာသားသမီးအပေါ်အမြဲမြည်းကြိုးကိုဖြည်။ လျှင်သင့်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးသာကိုးရီးယား၊စကော့တလန်အတွက်၊တစ်ဦးအားကစားရုံထဲမှာကနီးရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးများ၊အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်နေထိုင်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှု။ အခါသင်အမြဲအနီးအမျိုးသမီးတစ္ဆစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းစက်အတွက်အားကစားရုံ၊အောင်သေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရှေ့ဆက်-ရင်ဆိုင်နေရ။ အများစုကကိုးရီးယားအမျိုးသမီးရန်လိုပေမည်ပဲဤလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့မပါဘဲစိုးရိမ်ပူပန်နေ။ မှတ်ချက်အများကြီးပိုနှင့်အတူကိုရီးယားအမျိုးသမီးအားကစားရုံမှာသွားနေတယ်ဆိုရင်သင်မှန်မှန်စကားပြောပြီးတာနဲ့အဲဒီအစားတစ်ဦးသည်တောင်းအစည်းအဝေးမှာပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး။ နေရာများ၏ဂီအခါတိုက်ရိုက်အရပ်တွင်နေသောပူနွေးသောအိပ်ရာအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်း အထီးကျန်ဆန်။ အားလုံးမိန်းကလေးများရီးယားမှာဖြစ်နိုင်လည်းပိုပြီးဆွဲဆောင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောအရက်ဆိုင်ကြောင့်၊အကြောင်းအရာတစ်ခုခုလည်းမရှိလျှင်သင်တို့အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်အသားဈေးကွက်၊အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးညဥ့်အချိန်ထူထောင်။ သွားရန်၊ဒေသခံဂီတ၊အကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရလိမ့်မည်ပိုပြီးကံကောင်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးထက်။ အများစုကကိုးရီးယားအမျိုးသမီးသွားကြဖို့ပိုနှစ်သက်အတွက်တစ်စုလျှင်သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးရည်းစားသူဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်သင်၏အဆွေခင်ပွန်း၊သင်မဝယ်နိုင်သူအမျိုးသမီးအကျိုးစီးပွားသင်လျှင်ပင်၊သင်၌စိတ်ဝင်စားကြ။ လူတိုင်းနီးပါးချစ်ခွေး၊ပါဝင်သောအများဆုံးမိန်းကလေးငယ်ရီးယားမှာ။ ပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်အခွေးများအတွက်၊သွားရောက်ကြည့်ရှုတစ်ဦးကိုခွေးပန်းခြံစေပါလိမ့်မယ်သင်ကြားလေ့ကျင့်နေစဉ်သင့်ခွေးကိုသင်တို့အဘို့အရှာနေတဲ့လူကြီးလူကောင်းစကားပြော။ ငယ်ရွယ်သူအမျိုးသားများသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်တစ်ဦးကိုခွေးပန်းခြံကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်ကြည့်ရှုသင့်တဲ့နေရာမျိုးသမီးများစွာရှိပါတယ်ရီးယားမှာ။ အားလုံးပြီးနောက်၊အမျိုးသမီးအများစုလိမ့်မည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအတွက်ခွေးပန်းခြံမှပိုမိုနီးကပ်သင့်နေ၏။ မြောက်ကိုးရီးယားမှာ၊သင်၊ဒါကြောင့်မဖြစ်စေခြင်းငှါအလွန်အဆင်ပြေဖို့ခရီးသွား၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ခရီးသွားလာဖို့တောင်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တွေ့ဆုံလှပတဲ့ကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။အဓိကအားသာချက်၏ခရီးသွားလာဖို့တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအများစုတိုင်းပြည်အတွက်ထိုင်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်၏ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အစည်းအဝေးသောသူအမျိုးသမီးပွဲစဉ်များချမှတ်သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒ။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်သည်လည်းပေါ်ရေတွက်တော်တော်မိုက်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံ။ ခရီးသွားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်၊စိတ်ကိုမှီပြီးတော့သင်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်ထက်အများကြီးပိုအတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုရီးယား။ သုန်၊နေ့တစ်ဦးစာရေးဆရာအဘယ်သူသည်အထောက်အကူပြုရန်မှန်မှန်၊အသက်အရွယ်ကန့်သတ်။ သူကူညီပေးခဲ့များစွာသောလုလင်တို့သည်အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်၊အပြင်၊သူနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံ။ လူကိုကူညီဖို့တည်ဆောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်က၊အထူးသဖြင့်သင်။.
အခမဲ့အတွက်ငွေတစ်ခုတည်းအမေရဲ့နေအိမ်တိုးတက်မှုဆာင္မ်ား တယ်။ တစ်ဦးတစ်ခရီးလွတ်- ကြက်ဥအိုး။ တစ်ခုတည်းမိခင်များစာရင်းအင်းအမေရိကန်ဟာသကောင်လေးဟာသ၊တစ်ခုတည်းပါတီအကြံဉာဏ်များကြီးတစ်ခုတည်းကောင်လေးကိုးကား:အဖော်မှနံပါတ်များအီတဦးခ်င္းတစ်ခုတည်းပြန်လည်သုံးသပ်အင်ဂျင်လေယာဉ်ေရာင္းမည့္ ငါ့ပွဲအီတဦးခ်င္းတစ်ဦးတစ်ယောက်ကလပ်အသင်းအတွက် ေရတစ်ခုတည်းမျက်မှတ်ချက်ငါ့ပွဲအီတဦးခ်င္းမိတ်ဖက်များအရေအတွက်တစ်ခုတည်းမိခင်များအတွက်ထောက်ပံ့နေအိမ်ကိုဝယ်ယူ၊ရီတစ်ခုတည်းမိခင်ကလပ်အခမဲ့အွန်လိုင်းငါ့ပွဲအီတဦးခ်င္းဘာလင်ဦးဆောင်အဆိုတော်ငါ့ပွဲအီတဦးခ်င္းနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ခုတည်းယောက်ျားအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နက္ျပာေရာင္အမ်ိဳးရေချိုး တစ်ခုတည်းမိခင်များအကူအညီများအတွက်ကောလိပ်ကျောင်းဝန်းသီချင်းရဲ့စာသား။ ပါရှအမျိုးသမီးအ တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါင်းတို့သည်-အားလုံးပါဝင်လပ်ရက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကလပ်အသင်းအတွက်နယူးယောက်တည်းအင်ဂျင်လေယာဉ်ပေါ်မှာရောင်းချ တစ်ဦးတစ်ယောက်လုံးအပေါင်းတို့သည်-အားလုံးပါဝင်လပ်ရက်တာဘိုအခွန်များအတွက်အရင်းမိတ်ဖက်၊တစ်ဦးတစ်ညယောက်တည်းအိမ်ရှေ့တံခါး-မိတ်ဖက်တွန်ရေးက်ဖုန္းနံပါတ္၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘောငယ္ခ်င္းဒပ်ဗလင်အိုင်ယာလန် ကြက်ဥပန္းကာက္ႀကောလိပ်များအတွက်ထောက်ပံ့ကေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊အခမဲ့ချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကျော်ကထောက်ခံမှုအုပ်စု ရန္တစ်ခုတည်းမိခင် တစ်ခုတည်းမိခင်ပညာသင္ဆုမ်ားကယ်လီဖိုးနီးယား။ လူပျိုအမေရဲ့ဝန်ရိုးညွှန်းတမ်း။ ရာခိုင်နှုန်းအတစ်ခုတည်းမိခင်အားဖြင့်အပြေးပြိုင်ပွဲ။ တစ်ခုတည်းမိခင်စာရင်းဇယားဆုပ်တ သဲလွန်စသွားဖို့အဆင်သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးႇတစ်ဦးတစ်ခရီးသွားလာအပေးအယူ၊ဘာလင်ပေးပါချောင်း။ တစ်ခုတည်းအစွန်းတုန်းဓါးအင်္ကျီ:တစ်ခုတည်းဖစ္ၿလေယာဉ်ပျံပေါ်မှာရောင်းချ အဖော်အခြေခံထောက်သွားဖို့အဆင်သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးႇခမဲ့ကလောင်အဆွေခင်ပွန်းသာ-မင်ရင်းနှီးသာတည်းစွန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုသင်တုန်း၊ချီကာဂိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးတစ်ပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္တစ်ဦးတစ်ခရီးနိုင်ငံတကာသုံးသပ်ချက်။ တစ်ဦးတစ်ခရီးသွားအုပ်စု၊တစ်ခုတည်းမိခင်'ဝိုင်းကျု သွားဖို့အဆင်သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးႇတစ်ခုတည်းဖစ္ၿလေယာဉ်ပျံေရာင္းမည့္ တြက္သာျတကၠမေလးရွားသစ္ထုတ္လုပ္မွဳလူပျိုအမေရဲ့န္ႀကီးဌာနရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းမိခင်ကလပ်ပစ်ပြန်စစ်ပယ်၊အကောင်းဆုံးခရီးသွားလမ်းညွှန်သည်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားဥရောပလူပျိုအမေရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရည်မှန်းချက်များ၏အများကိန်းဒေသခံများ၏:အဖော်ဏန်းကိုတစ်ခုတည်းအမေရဲ့န္ႀကီးဌာနရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရင်းအဖွဲ့ဝင်။ ပညာသင်ဆုအတွက်အဆင့်ကျောင်းအတွက်လူပျိုအမေထောက်ပံ့ငွေနှင့်ပညာသင်ဆု။ အသေးစားလေယာဉ်များအတွက်။ အခမဲ့အတွက်ငွေတစ်ခုတည်းမိခင်ဥပဒေကြမ်းများဆပ်ဖို့၊တစ်ခုတည်းသွားအလာအချက်ပြအရောင်ပြောင်း။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအကြမ်းတစ်ခုတည်းအမေရဲ့န္ႀကီးဌာနရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကြက်ဥ ပန္းတစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်ကျော်ဖလော်-ဘယ်လိုမှလူသစ်ဖြည့်ဆည်းမပါဘဲအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်သုံးစွဲသွားအလာအချက်အကဲတစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်သုံးစွဲရေယုန်ရောဂါကုသမှု၊အလွန်ကြီးတစ်ခုတည်းကောင်လေးကိုးကား၊တကၠမေလးရွားဘက္ပိုင္းတစ်ခုတည်းမိခင်ရောက်သတင်း။ ဟမ်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးတစ်။ အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်တစ်ခုတည်းယောက်ျားအဘို့။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်မျက်စိကန်းသောလူတစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်သုံးစွဲတစ်ဦးတစ် နိုင်ငံတကာခရီးသွားတိုင်ကြား၊ဒိုင်းမိတ်ဖက်အစီအစဉ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်သုံးစွဲတစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်ကျော်သုံးစွဲတစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်။ တစ်ခုတည်းကောင်လေးဟင်းချက်တစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်အသုံးပြုမှုတစ်ခုတည်းမိခင်ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်အလမ်းညွှန်များအတွက်လူပျိုအမျိုးသမီးထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသူသို့မဟုတ်ရွေးကြပြီမိခင်ဂျိန်း မိတ်ဖက်ဘတ်စကက်ဘောပစ်ခတ်မှုစစ်ရေးလေ့ကျင့်တန်းတစ်ဦးတစ်ယောက်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်တစ်ခုတည်းအစွန်းကိုရိတ်သင်တုန်းအမျိုးသားများအတွက်။ လေယာဉ်ပျံေမာ္ဒယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ဘာလင်ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရန်တစ်ခုတည်းယောက်ျားအတွက်ကျွန်ရရန်မည်သို့ထောက်ပံ့ကြေးအတွက်ကျောင်း။ တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားအတွက်နှင့်အထက်:ဘာလင်ပေးပါချောင်း။ တောင်ဘက်ဂျာတစ်ဦးတစ်။ ချက်ချင်းအိမ္ရာအဆင့်တွင်ဂျော်။ ပါတီပးလ်က္ရိွသည့္တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းတီ ။ လူတဦးပူးေ တစ်ဦးတစ်ကျွန်တစ်ဦးတစ်။ တစ်ခုတည်းကအသက်ဂိမ်းတစ်ခုတည်းအတွက်ပါဘူးငါ့ဧရိယာမပါဘဲတက်လက်မှတ်ထိုးတကၠ မေလးရွား တချိန်ရနှင့်င္ခြတစ်ခုတည်းအသွားအလာအလင်းဝါသနာစက်ကိုအတစ်ခုတည်းမိခင်ကလပ်ရုပ်ရှင်။ အီတဦးခ်င္းပြန်လည်သုံးသပ်။ ခရီးသွားလာခရီးစဉ်များအတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကျော်အီတဦးခ်င္းပြန်လည်သုံးသပ်။ တစ်ဦးတစ်ခရီးသွား လွတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ တစ်ခုတည်းမိခင်ရဲ့အကူအညီအတွက်ဂျော်။ တစ်ခုတည်းမိခင်များဝိုင်းကြက္၊ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေအမျိုးသမီးများ၊ရပ်ရွာလူလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကြိုသည်။ ပါျလူပ်ိဳ-ကယ်လိုရီအတွက်ရွိုတစ်ခုတည်းဟမ်ဘာဂါ။ စျေးပေါနောက်ဆုံးမိနစ်ဟိုတယ်တစ်ခုတည်းမိခင်ရဲ့အကူအညီအတွက်အော်စတင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်
ချိန်းတွေ့အာရှအမျိုးသမီးများအဆက်ဆက်ရတဲ့ကြားရေပန်းစားအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများအဖြစ်အာရှအမျိုးသမီးများယူဆကြသူများ၏အလှဆုံးအမျိုးသမီးအတွက်။ သို့သော်၊အများအပြားအခါကြိမ်အမျိုးသားဘူးတဲ့သဲလွန်စများအပေါ်ချိန်းတွေ့ဖို့ဘယ်လောက်အာရှအမျိုးသမီးအတက်အဆုံးသတ်၊သူတို့အတွက်အချဉ်ဆက်ဆံရေး၊အလုပ်မဖြစ်ဘူးကောင်းစွာထွက်သည်။ အာရှအမျိုးသမီး ရှိအစဉ်အလာတန်ဖိုးထားလေးမြတ်တန်ဖိုးထားလျှင်သင်အနည်းငယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်နားလည်သူတို့မိသားစု။ ချင်လျှင်သင်ရက်စွဲတစ်ခုအာရှတည်း၊ဤအမှု၌စိတ်ကိုအခါသင်နောက်ဆုံးတွင်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်။ အာရှအမျိုးသမီးများနှင့်နီးစပ်သူတို့မိသားစု၊အောင်ကြိုးစားနားလည်သဘောပေါက်ရန်အမျိုးသမီးရဲ့မိသားစုနဲ့ရလို့သူတို့ကိုသို့မဟုတ်ပင်တွေ့ဆုံရန်လျှင်၊သူတို့ကိုသင်သူမ၏တွဲအတွက်စိတ်ဝင်စား။ သငျသညျဆိုပါကေလးစားရသူမမိသားစု၊ဒါကြောင့်သက်သေပြပါလိမ့်မယ်သူမ၏မှသင်၏မိသားစုဖြစ်သည်နှင့်၊သူမသင်ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ကျောအဟောင်းနေ့ရက်ကာလ၌၊မိန်းကလေးများ'မိဘတွေကဆုံးဖြတ်ချက်သူမ၏ထောင်ပြု၊ယခုမူကားတစ်ဦးတစ်ယောက်မှအာရှယူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအသက်တာဆုံးဖြတ်ချက်။ သို့သော်၊အခြားမိဘများနေဆဲအရေးကြီးပါသည်။ သင့်ရဲ့အာရှနေ့စွဲရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ။ တစ်ခုတည်းသောအာရှအမျိုးသမီးများနှစ်သက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို၊ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကုသကဲ့သို့သာမန်တစ်ဦးတစ်ယောက်တွေ့ဆုံအတွက်ကလပ်။ အခါ၊သင်ရက်စွဲ၊သူတို့ပဲသူတို့ကိုသို့ဘာမှမ? သူတို့ယူလိုမှုအနှေးနှင့်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဆက်ဆံရေးနောက်ထပ်၊သူတို့မရှိပါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ လး သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးနှင့်သူမ၏အမြင်များ၊နှင့်တဲ့အခါသင်ကအနိုင်ရသူမ၏စိတ်နှလုံးသည်၊သူမ၏သင်အပေါ်သစ္စာမြဲ။ တစ်ချိန်ကအာရှအမျိုးသမီးများလက်ထပ်ရန်၊သူတို့အဆိပ်အဖြစ်၊သူတို့ပုံမှန်ဘယ်တော့မှအပေါ်ခိုးချတော့သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်း၏။ အာရှအမျိုးသမီးများနက်ရှိုင်းစွာယဉ်ကျေးမှုအမြစ်များ၊ဒါကြောင့်သေချာအောင်သင်အနည်းဆုံးတစ်အခြေခံနားလည်သူမ၏ယဉ်ကျေးမှု၊မီသင်သည်စတင်ချိန်းတွေ့သူမသို့မဟုတ်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့။ ပေမယ့်အခွံမှလိုက်လျောညီထွေ၏ယဉ်ကျေးမှုတခါတခါလူနေမှုနှင့်အတူသို့သော်၊အခွံအမှန်တကယ်ကတူလျှင်သင်အပြအနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုသူမ၏နားလည်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ များစွာသောနေစဉ်တစ်ခုတည်းအာရှအမျိုးသမီးများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတြက္ဦး၊သူတို့နေဆဲကံဳႏုနယ္မႈ၊နှင့်အကောင်း ။ သူတို့လိုချင်တဲ့မိမိတို့အမခင်ပွန်းဖြစ်၏ခေါင်းဆောင်မိသားစု၊အဘယ်ကြောင့်နှင့်ဤသည်သင့်အချို့ကိုပြသစိုး။ ဤအကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသင့်ဆက်ဆံသင့်အာရှမယားအဖြစ်အလယ်တန်းလူတစ်ဦး၏အသက်တာ၌သင်ရုံရှိသည်ကိုပြသဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်း။ ဒီမွာသူမဟာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်နိုင်လိမ့်မည်၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ စိတ်ကိုထားပါကအာရှ အမျိုးသမီးများကိုရှက်။ ဒါကြောင့်၊အာရှတစ်ခုတည်းမပြပါဘူးဏာမခြေလှမ်း၊ဒါကြောင့်အကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူမ၏နှင့်ချိန်းတွေ့စိတ်ဝင်စားမဟုတ်။ ဤအမျိုးသမီးများယုံကြည်သောယောက်ျားယူသင့်ပထမဦးဆုံးအဆင့်၊နှင့်အရှင်စောင့်ဆိုင်းသင်တို့အဘို့အ၊မည္၊ပါသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံရန်။ လျှင်သင်နှစ်ခုတွေ့ဆုံရန်ချင်၊သင်မျှော်လင့်နိုင်ပါသူမပြောတယ်။ တခါတရံ၊သူမကမပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့၊ဒါပေမယ့်အပြုံးအစား။ သငျသညျအထဲကရှာတွေ့ဖို့လိုပါတယ်အဓိပ္ပါယ်ကိုသူမ၏အပြုံးနှင့်မျက်နှာမပျက်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့သင်၏အာရှနေ့စွဲ။ အာရှအမျိုးသမီးတွေစဉ်းစားသောအမျိုးသားများအဖို့ရဲရင့်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အဆိုပြု။တဦးတည်းအရာကအာရှအမျိုးသမီးသည်သူတို့ကြည့်ရှုထက်အများကြီးနုပျိုသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်၊သူတို့အသနားခံစာနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့။စိတရုတ်၊၊ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္၊သူတို့အားလုံးယဉ်နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအသားအရေ။ အစကတည်းက၊သူတို့ယေဘုယျအားရှိသည်တစ်ခုစိတ်ဖိစီးမှုများဘဝ၊သူတို့ကတက်ကြွနှင့်တက်ကြွ။ နေစဉ်အာရှမိန်းကလေးများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်နှင့်ကျောင်းများ၊သူတို့အရှက်မဖွင့်ဖို့။ အဘယ်ကြောင့်ဤချိန်းတွေ့အာရှတစ်ဦးတစ်ယောက်ကအွန်လိုင်းမှာအကောင်းစိတ်ကူးဖြစ်၊ဒီအဘို့အရာအာရှအမျိုးသမီး ချိန်းတွေ့၊ဒါကြောင့်သင်သေချာဖြစ်သူတို့အားလုံးကိုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ဖန်တီးချင်တယ်အရှည်လျား-တည်မြဲဆက်ဆံရေးမျိုး။ ချိန်းတွေ့အာရှအမျိုးသမီးအရမ်းမခက်ခဲ၊ဒါပေမယ့်လည်းမလွယ်ကူ။ ရုံသေချာအောင်သင်ရဲရင့်ပြီးစိတ်ချယုံကြည်အခါသင်၏နေ့စွဲအာရှအမျိုးသမီးများကြောင့်၊အကြောင်းတစ်ခုမှာအဓိကအရည်အသွေးသူတို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်။.
တွေ့ဆုံ နှုတ်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများ-ကိုရီးယားချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းကွန်မြူနတီ။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကကမ်းလှမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတကယ်အောင်မြင်စွာသိမှရသင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အသငျသညျအဘယျသို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်။ အွန်လိုင်းဆက်စပ်ဝိညာဉ်နှင့်မိတ်ဆွေများအတွက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနေသောလူအချိုနဲ့လှပတဲ့နှင့်အတူ၊အတိတ်ကယားရောက်ရှိလာခဲ့လက်ျာအရပ်ဌာန၌။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုရီးယားနွယ်ဖွားသမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေအသက်တာ၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများဤစာမျက်နှာပေါ်တွင် သူတို့တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်း၊စိတ်ရင်းမှန်နှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားသူအတွက်အစည်းအဝေးကနေလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့၊များအတွက်ချစ်ကြည်ရေး၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ဘောကန်နှင့်အိမ်ထောင်။။။။ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်အခမဲ့သင်ဝင်ရောက်ရန်အသင့်ပရိုဖိုင်း။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်၏၊သင်ချက်ချင်းလက်ခံအနေနဲ့န့်အသတ်အရေအအီးမေးလ်ကနေနေသောအမျိုးသမီးစိတ်အားထက်သန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဒီဆိုဒ်ထောက်ပံ့အီးမေးလ်စနစ်နိုင်ရာကနေစီမံခန့်ခွဲလုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာပေးစာယူ။ ဆန္ဒရှိလျှင်၊ဤအပြင်၌၊သင်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်င့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအကောင့်ကိုအဘို့အသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေရဖို့တစ်ဦးပရီမီယံရွေးချယ်မှုဆက်သွယ်ဖို့မည်သည့်အမျိုးသမီး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝန်ထမ်းများအဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်ဖို့သင်ကူညီရှာဖွေအိပ်မက်များ၏မိန်းကလေး။
ပူးပေါင်းအခမဲ့ချက်တင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မရှိခဲ့ဖူးကြောင်းလွယ်ကူသည်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချက်တင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါသာ။ ရ အရေအစိတ်ဝင်စားဖို့အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၊အခမဲ့ချက်တင်အတွက်တရုတ်နှင့်အတူ။ အွန်လိုင်းချက်တင်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊ခ်ိတ္ဆက္ပါ၊ပိုပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်စတင်က်ပ္။ ငါချင်ချက်တင်ယခုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့။ ပူးပေါင်း ကနေတရုတ်နိုင်ငံနှင့်တွေ့ဆုံရန်အအံ့သြဖွယ်လူဦးအသိုင်းအဝိုင်း။ တွေ့ဆုံပြီးလူအုပ်စုများအတွက်ရောနှင့်အရင္လိုမှတရုတ်နိုင်ငံအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
အပျေါမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့၊အသုံးပြုသူရန်သဘောတူလက်ခံရရှိအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများဆက်စပ်ဖိုင်အလှူရှင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့မရောင်းဘူးသို့မဟုတ်ချိန်းအချက်။ လစဉ်ထောက်ပံ့ကူညီလိမ့်မယ်၊သင်သေချာအောင်ကြောင်းမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ မည်သူမဆိုစူးစမ်းလုံလောက်ကိုကြည့်သောသူသည်အသိပညာ၊ကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်သူတို့အားလုံးကိုကဒီမှာ။ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတူတူ၊ကျနော်တို့အဆောက်အများပြည်သူစာကြည့်တိုက်များအနာဂတ်။ ငါသင်မေးတာနဲ့နှင့်သာတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ကူညီကျေးဇူးပြုပြီးနှင့်အတူယခုတစ်ဖိုင်ကနေအင်တာနက်ကို။ အများစုဟာသင်မတတ်နိုင်ပါကြောင်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားလက်ဆောင်၊တစ်ဒေါ်လာ။ လျှင်လူအပေါင်းတို့သည်သုံးပြုနိုင်ချစ်ပ်အတွက်ဒေါ်လာ၊ထို့နောက်သင်တက်အဆုံးသတ်နှင့်အတူရန်ပုံငွေ။ ဤအချက်မှာ၊အရက်ရက်ရောရောထောက်ပံ့မည်ပွဲစဉ်များ၏လှူဒါန်းမှု၊ဒါကြောင့်သင်သုံးဆ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်စျေးနှုန်းတစ်ဦး၏အိတ်ကပ်စာအုပ်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဦးဆိုင်အပေါ်ရေတွက်နိုင်ကြောင်း။ ကျနော်တို့သာအလုပ္သမားမ်ား-ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များအတွက်။ ထံသိုစာဖတ်သူရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်၊ဒါကြောင့်သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ ကျနော်တို့သဘောတူဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆဲလိုအပ်ဆပ်ဖို့အတွက်ဆာဗာနှင့်ဝန်ထမ်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ငါ၏အအိပ်မက်ခဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့စာကြည့်တိုက်အနှံ့လမ္းစေဖို့လက်လှမ်း။ အောင်ချက်အလက် ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကိုက်ညီ။ ကျွန်တော်သိနိုင်လစာငွေ၊ထိုအခါမူကား၊မအောင်မြင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်၏စာကြည့်တိုက်တာဝန်ခံအခမဲ့အဘို့အတစ်ခုလုံးကိုအင်တာနက်။ အဆိုပါဖိုင်သည်အွန်လိုင်းကတစ်ဆစ်ခြင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုအပ်၏အကူအညီ။ သင်ရှာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုရင်လူတိုင်းအောင်ပံ့ပိုးမှု၊ဒေါ်လာငွေအတွက်၊ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးပြည့်စုံသောဤရန်ပုံငွေ။ ဤအချိန်၊သင့်အလှူငွေဖြစ်လိမ့်မည်ဖက်သောနှစ်ဆတိုးလိမ့်မည်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သင်လိုအပ်သမျှအဘို့အစျေးနှုန်း၏စာအုပ်သင်သည်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှာထောက်ပံ့ဖို့တစ်စာကြည့်တိုက်အကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာပေါ်သူ သူမကိုး။ ထံသိုကစားသမားကိုယ်ရေးအချက်၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမ။ ကျနော်တို့လက်မခံကြဘူးဆို။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲဆပ်ဖို့အတွက်ဆာဗာနှင့်ဝန်ထမ်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ငါ၏အအိပ်မက်ခဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့စာကြည့်တိုက်အရာအားလုံးနှင့်လုပ်ယူနိုင်၏။ ငါသိနိုင်ဘူးမြှင့်ငွေ၊ဒါပေမဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်မဖြည့်ဆည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်။ အင်တာနက်ကိုဖိုင်ကိုအနေနဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာချိုင့်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုအပ် သင့်ရဲ့အကူအညီ။ သင်ရှာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသုံးဝင်၊တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလှူငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေအတွက်၊သင်နောက်ဆုံးမှာလိမ့်မည်ကိုလက်ခံရရှိဒီရန္ပံုေငြ၊ဒီနေ့။ ဤအချက်မှာ၊ထိုယူနစ်နှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်၊နှစ်ဆ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်စျေးနှုန်း၏စာအုပ်နှင့်တိုက်သောလောကဓာတ်လုံးကိုကိုး။ ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံထားဖို့စာဖတ်သူရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေး၊ဒါကြောင့်လဲကျနော်ဘယ်တော့မှသူတို့ကိုလိုက်နာ။ ကျနော်တို့သဘောတူဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆဲလိုအပ်ဆပ်ဖို့အတွက်ဆာဗာနှင့်ဝန်ထမ်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ငါ၏အအိပ်မက်ခဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့စာကြည့်တိုက်အနှံ့လမ္းစေဖို့လက်လှမ်း။ နိုင်ဘူးဆိုတာသိမြှင့်ငွေ၊ဒါပေမဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်မဖြည့်ဆည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်။ အဆိုပါဖိုင်သည်အွန်လိုင်းကတစ်ဆစ်ခြင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုအပ်၏အကူအညီ။ သင်ရှာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုရင်လူတိုင်းအောင်ပံ့ပိုးမှု၊ဒေါ်လာငွေအတွက်၊ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးပြည့်စုံသောဤရန်ပုံငွေ။ ဤအချက်မှာ၊သင့်အလှူငွေနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟု၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အားလုံး၊ အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်အနေနဲ့စျေးနှုန်းသက်သာအိတ်စာအုပ်မှပံ့ပိုးမှုစာကြည့်တိုက်သောလောကဓာတ်လုံးကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်။ သာန်ထမ်းများရှိသည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏အကောင်းဆုံးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ။ အကြှနျုပျတို့သညျမှကျူးလွန်ကိုသီးသန့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများ။ ကျနော်တို့လက်မခံကြဘူးဆို။ သင်တို့မူကားနေဆဲအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ဆာဗာနှင့်ဝန်ထမ်း။ အဆိုပါဖိုင်သည်အွန်လိုင်းကတစ်ဆစ်ခြင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုအပ်၏အကူအညီ။ သင်ရှာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၊သငျသညျသဘောတူရန်လက်ခံရရှိအီးမေးလ်များဆက်စပ်ဖိုင်အလှူကိုအင်တာနက်ကနေ။ သင်၏ကိုယ်ရေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျနော်တို့မရောင်းဘူးသို့မဟုတ်ရှယ်ယာသင့်ရဲ့အချက်အလက်နှင့်အတူမည်သူမဆို။ သင့်ရဲ့လစဉ်ကြေးကိုသေချာအောင်ကူညီပေးပါမည်အကြောင်းစပ်စုမည်သူမဆိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဒီမှာ။ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတူတူ၊ကျနော်တို့အဆောက်အအုံပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်အနာဂတ်မှာ။ လိမ္ျအတွက်လိုအပ်သည်ဗီဒီယိုကစားသမားအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့အင်တာနက်ဖိုင်ကို။ ပုံသခ်ာေအာင္ျမချိတ်ဆက်။ စစ်ဆေးပါ သင့်ရဲ့ရာက္ဇာချိန်ညှိဖို့ဒီကိုသုံး။
ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူဦးခေါင်းကျပန်းတစ်စုံကမ္ဘာအနှံ့မှအပေါ်အခြေခံပြီးကမ်ဝ့။ သင်စကားပြောနိုင်၊အမျိုးအစားသို့မဟုတ်ပဲလှုပ်လက်မှမျက်နှာကိုမျှဝေသင့်ရဲ့စိတ်ကူး။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအနေဖြင့်လျှောက်လွှာအခြားခွဲ၊စိတ်အပိုင်းများ၏ကွန်ယက်အင်တာနက်အမျိုးအစား။ အတွက်လောလောဆယ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဗမာအပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှုအပေါ်။ (ဗားရှင်း)ကိုေဒါင္းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ကိုယ့်အစိမ်းရောင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကိုထက္ဖို့စတင်။ အခုချိန်အထိအဆိုပါအစီအစဉ်ကဒေါင်းလုပ်အကြိမ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားဖိုင်ကအစာဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းငှါ၊သို့သော်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်များအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေး ဒေါင်းလုပ်ဆော့ဝဲလ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဗိုင်းရပ်။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဆိုပါပံု၏ ကတည်းကတင်ထားသောခဲ့သည်ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်၊ထိုသို့သည်အပေါ်ပျော့ပျောင်းအပေါ်။ အောက်တွင်မြင်ရသောအပြောင်းအလဲအတွက်အသီးအသီးဗားရှင်း:ရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်းများ၏လူမှုငါ့ကိုရိုက်နှက်ဂိမ်းရိုက္ႏ၊မျက်နှာအွန်လိုင်းသင်္ချာဥာဏ်စိန်ခေါ်မှု။ ခါင္ကအားဖြင့်သင့်ရဲ့ အကောင့်ကိုစိန်ခေါ်မှုသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ကျပန်းစိန်ခေါ်မှုလူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းရမှတ်စုဆောင်းမျှဝေ။ အစဉ်အမြဲတူခံစားလူမှုမီဒီယာနှင့်ချိန်းတွေ့လီေ၍အနုပညာ၏။ ရင်ဆိုင်ဖို့ခွင့်ပြုစေတဲ့ကွန်ပျူတာသို့ပြန်လာကြတစ်ဦးကိုချက်ချင်းလက်ငင်း၊စစ်မှန်သော-ဘဝအစည်းအဝေးအတွက်အဆင်ပြေပြင်ဆင်၏။ ဗီဒီယိုစကားပြောေ ခွင့်ပြုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျပန်းစကားကလူအတွက်အသင့်ရဲ့အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအလွန်စွဲလမ်းသည်။ တစ်ခုရှိသည်အလွန်ကြီးစွာသောစကားလက်ဆုံနှင့်အတူစိမ်း၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ကမ္ဘာ့အ။
တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊နာမည်တစ်ခုအတွက်တစ်ကိုယ်ရေယောက်ျား။ နန္းအနက်အဓိပ္ပာယ်၊ကျန်အမျိုးသားကိုရှာသေးရှိသည်ဇနီးနှင့်နိုင်ငံအတွက်နှင့်အတူကြီးထွားလာသောကျားမကွာဟကြောင်း၊ကြီးမားတဲ့ပြဿနာ။ တရုတ်အများအပြားရှိပါတယ်သန်းပေါင်းများစွာ ပိုပြီးအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီး၊အရက်ကိုနိုင်ငံတ-ကေလးမူဝါဒခဲ့သောလာျအတွက်၊သော်လည်း၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်များစွာပို။ ကျားမအချိုးမညီမျှဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပြားများအတွက်ယောက်ျားရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကွာဟဖွယ်ရှိသည်ကျယ်ဝန်း။ အားဖြင့်၊၎င်း၏့မွန္းရှိလိမ့်မည်သန်းထက်ပိုပြီးယောက်ျားရှာဖွေနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖော်။ သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်၊ထိုလူဦးရေအနာဂတ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးပညာရှင်လပ် ဒွေးမံကိန်းအကြောင်းအားဖြင့်၊ထက်ပိုပြီး၏လေးပုံတစ်ပုံတရုတ်အမျိုးသားများအတွက်သူတို့ရဲ့့ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်။ အခုတော့၊နှင့်ဝေးနည်းပါးလာအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်၊အပြေးပြိုင်ပွဲကိုရှာဖွေရန်သင့်တော်သောမိတ်ဖက်နှင့်အနိုင်ရသူမ၏ကျော်မှီအခြားတစ်ယောက်ယောက်ပါဘူးဦးဆောင်ခဲ့ပြီးလူအချို့သွားကြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအတိုအရှည်ကိုရှာပါ။ သူတို့ကအသုံးစရိတ်ကျယ်ပြန့်ခုအပေါ်ဖန်တီးမှု၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်အောင်မြင်သော၊အတိုင်းအနိုင်ရမှအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ အတွက်၊တရုတ်စီးပွားရေးသမားသူ့သတင်းများအရတရားစွဲတစ်ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်မိတ္ဆက္ေအဂ်င္စီပြေရှာတွေ့မှသူ့ကိုတစ်မယားပေးဆောင်ရကုမ္ပဏီသန်းယွမ်(ဒေါ်လာ)ပြုလုပ်ရန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ရှာဖွေရေး။ အခြားကိစ္စများတွင်၊ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာအနေဖြင့်တောင်ပိုင်း၏မြို့တော်ကိုုဝယ်အိုင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တစ်ဦးပီပီအလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကိုမှသူ့ရည်းစား။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊သူကပယ်ချ၊နှင့်အတူသူ၏အရှက်ဆိုးရွားဖြစ်၏ဓါတ်ပုံများအဖြစ်အပျက်တွေဟာကျယ်ပြန့်နှံ့မျှဝေလူမှုမီဒီယာ။ အစိတ်အပိုင်းပြဿနာရဲ့အကြောင်းအဟောင်းနှင့်အသစ်အနည်းလမ်းများကိုအစည်းအဝေး၏လူသည်အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်ကိုင်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးခဲ့သည့္အတြက္အခွင့်အလမ်းများအတွက်တည်းဖို့လူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်တစ်ခုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ လူအများစုကခရီးအဆိုပါတိုက္ခန္း၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအတွင်းပွဲတော်များ၊ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောအကြားဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်နင်္လာများအပြားအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလားအလာမိတ်ဖက်။ ဒါပေမယ့်ကာလကြာရှည်အစဉ်အလာအစည်းအဝေး၏အလားအလာမိတ်ဖက်ရှိပါတယ်ပေးထားသောလမ်းကိုခေတ်မှီ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အစာရှောင်ကြီးထွားလာအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊အဖြစ်၊နှင့်စာတိုပေးပို့လီေကဲ့သို့သောထောက်လှမ်းရေးပို။ပိုနည်းလမ်းများကိုသိရန်ရတဲ့၏။ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်လာပို။ထားနဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်အတူအနည်းလမ်းများ၏အနောက်နိုင်ငံများတွင်မကြာသေးမီနှစ်များ၊ေဘာလီပါ။ လူငယ် မြေးဆက်များပိုပြီးရွေးချယ်မှုနှင့်သူတို့အောက်သူတို့၏စိတ်နှလုံးထက်မိဘများ။။။။ အမြောက်အမြားချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းများစွာနှင့်အတူအမျိုးသမီးအများစုရှိကျေအလမ်းကလူတွေ့ဆုံရန်နှင့်တရားရုံးတွင်တရုတ်နိုင်ငံ။ ဘာလီ၊ အတွက် ပြည်နယ်၊တရုတ်နိုင်ငံ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကမ်းသည်တစ်ခုတည်းနှင့်သာသူမ။ သူမ၏သတိပြုမိခဲ့သည်ထွားလာ၏နံပါတ်များအမျိုးသားများအပေါ်တစ်ဦးတစ်မြင်ကွင်းတစ်ခုစည်းရုံးရေးအဖြစ်အသင်းနှင့်ငှားရမ်းအများပြည်သူဖျော်ဖြေရေးကွင်းအဘို့အချိန်းတွေ့။ အခြားအမျိုးသားများမှလှည့်နေကြတယ်စိတ်ပညာနှင့်င့္ဆံစေဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးနှစ်သက်စရာ။ နှင့်ရှောင်ရှားရန်ဖန်ဆင်းခြင်းကနေမေးခွန်းတွေစပ်စုမိဘမ်ား၊အချို့တို့သည်အပင်မှနိဂုံးချုပ်ငှားရမ်းအတုဇဥ္တင်ပြဖို့သူတို့၏မိဘများကိုအသုံးပြုလီေထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ငှားရမ်းငါ့ကိုအမည်ဖြင့်။ အစီရင်ခံစာအကြံပြုဌားရည်းစားထိကုန်ကျနိုင်မှ၊ယြမ္ေ(ဒေါ်လာ)။ အဆိုပါပြဿနာများကိုအတွက်အမျိုးသားများအဘို့ရှာဖွေတဲ့အဖော်အများဆုံးလူတန်းစားအတွက်ဆင်းရဲသောကျေးလက်ဒေသများအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားဖန်ဆင်းတော်အချိန်ကြာမြင့်စွာကျင်းပသည့်အစဉ်အလာအကြောင်းခင်ပွန်းဖြစ်ရမည်နိုင်ပူဇော်ဖို့တစ်လျောက်ပတ်သောအဆင့်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးနိုင်မီအဇ။ ေဟာင္ေယန်၊ အခုလက်ထပ်၊သူမ၏၊ဖော်ပြဤအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမိ-ယောက္ခမသည်။ ကယ်ချင်အမျိုးသားများလက်ထပ်ဖို့၊အနာဂတ်အမိ-ယောက္ခမမည်ကြောင်းတောင်းဆိုသူ၏ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူသည့်အဝကိုရှေ့တော်၌အိဆွေးနွေးလာမယ့်ခြေလှမ်း။ ဒါဟာရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဘယ်ကြောင့်အိမ်ပြီဒါကြောင့်အားမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊သူမကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီဘဏ္ဍာရေးဝန်အမျိုးသားများအပေါ်အောင်လည်းအခက်ခဲများအတွက်အမျိုးသမီးများစွာလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေ။ ကထပ်ပြောဖို့ကိစ္စ၊နဲ့ကြီးမားနံပါတ်များ၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ငွေကြေးကုန်ကျခြင်း၊လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လက်ထပ်။ အခါသူတို့အခြေချ၊သူတို့မကြာခဏရှာဖွေနေငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး။ အသက်အရွယ်ကွာဟချက်၏နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်ပိုပြီးဘုံရှိပါတယ်တရုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား။ 'ခက်မိန်းမတို့အဘို့ရှာတွေ့ဖို့အသင့်လျော်အမ်ိဳးပြီးနောက်သူတို့နှစ်အရွယ်၊ေဟာင္ေ။ များစွာသောအခွင့်တရုတ်ချင်အမျိုးသားများလက်ထပ်ဖို့ငယ်ရွယ်တော်တော်မိန်းကလေးများ။ အမျိုးသမီး၊အလှည့်အတွက်၊အဘို့အကြည့်ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်သောသင်္ကန်းမျက်နှာသို့အသက်ကြီးကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ပြောင်းပြန်လည်းမှန်သည်။ ကောင်းစွာပညာတတ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးလွတ်လပ်သောသူအမျိုးသမီးများတစ်ကိုယ်ရေနေဟုေခၚသည္ မလိုချင်တဲ့မိန်းကလေးများ၊ေျပာဟဲလ်မ၊အဘယ်သူသည်လက်ထပ်၊သူမ၏့အဆုံးတွင်ရှန်ဟိုင်း။ မိဘတွေကြီးမားတဲ့အရင်းအမြစ်ဖိအားရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊မကြာခင်မှာ။ သူတို့ကနေအမြဲပစ္စုပ္ပန်၊ေျပာရော်ဂျာရခ်ိန္၊အဘယ်သူသည်ယခုလက်ထပ်ပြီးအသက်တာ၌။ မိဘများကသူတို့တာဝန်ရှိအကူအညီမိမိတို့အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးမိသားစုစတင်၊သူကပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊သူတို့ကဖိအားမိမိတို့ကလေးကိုရှာတွေ့မိတ်ဖက်၊ချိန်းတွေ့နှင့်ပြင်ဆင်ထားရန်အဘို့အမင်္ဂလာဆောင်။ 'မျက်စိကန်းသောရက်စွဲ၊အရာစီစဉ်မိဘများအားဖြင့်၊ဖြစ်အလွန်ရေပန်းစားနေဆဲ၊ေျပာ တို့၊သူနှင့်တည်း။ မိဘမျက်နှာကြီးမားတဲ့လူမှုရေးဝေဖန်လျှင်မိမိတို့သမီးသို့မဟုတ်သားလက်ထပ်တော့သာမန်မိန်းကလေးတစ်ဦး့မိဘတွေစိတ်အားထက်သန်ပါစေသူတို့ရဲ့သမီးကိုအပေါ်သွားတစ်မျက်စိကန်းသောရက်စွဲနှင့်လက်ထပ်ရမီရောက်ရှိ။ ထို့နောက်အဆောက်အဦးအပြင်ထောင်တယ္။ မှာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမှာရှန်ဟိုင်းအသွယ်ထောင့်သည်လွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်မိဘပို့စ်လက်-ကျမ်းစာ၌ရေးထားကြော်ငြာအတွက်မိမိတို့အတစ်ခုတည်းကလေးသူငယ်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသေးစိတ်အဝင်ငွေ၊ပညာရေးနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ အချို့မိဘများမှလူသိများခဲ့ကြသွားရောက်ကြည့်ရှု စျေးကွက်အပတ်တိုင်းအတွက်နှစ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအောင်မြင်မှုရဲ့။ အဆိုင်းအတွက်ဘယ်လိုလူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်နှင့်မည်သို့အမ်ိဳးဝူးမိတ်ဖက်၊အထက္အားလုံးချပြီး၊အကြီးအပေါ်အလေးပေးမေတ္တာထက်လက်တွေ့ဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေး။ ဘာလီ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သူ၌အဘယ်သူမျှမအလျင်လက်ထပ်ရန်လိုလားသည်စောင့်သောသူသည်ထိုက်သည်သူမ၏နှလုံးနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အဒီပုံပြင်အခြားသူသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှသင်မြင်ပြီအပေါ်ဘီဘီစီမြို့တော်၊ဦးခေါင်းကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာမျက်နှာသို့မဟုတ်မည္ကျွန်တော်တို့ကိုတွစ်တာပေါ်မှာ။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊နာမည်တစ်ခုအတွက်တစ်ကိုယ်ရေယောက်ျား။ နန္းအနက်အဓိပ္ပာယ်၊ကျန်အမျိုးသားကိုရှာသေးရှိသည်ဇနီးနှင့်နိုင်ငံအတွက်နှင့်အတူကြီးထွားလာသောကျားမကွာဟကြောင်း၊ကြီးမားတဲ့ပြဿနာ။ တရုတ်အများအပြားရှိပါတယ်သန်းပေါင်းများစွာထက်ပိုပြီးယောက်ျားအမျိုးသမီး၊အရက်ကိုနိုင်ငံတ-ကေလးမူဝါဒခဲ့သောလာျအတွက်၊သော်လည်း၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်များစွာပို။ ကျားမအချိုးမညီမျှဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပြားများအတွက်ယောက်ျားရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကွာဟဖွယ်ရှိသည်ကျယ်ဝန်း။ အားဖြင့်၊၎င်း၏့မွန္းရှိလိမ့်မည်သန်းထက်ပိုပြီးယောက်ျားရှာဖွေနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖော်။ေသူ၏စာအုပ်၊ထိုလူဦးရေအနာဂတ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးပညာရှင်လပ် ဒွေးမံကိန်းအကြောင်းအားဖြင့်၊ထက်ပိုပြီး၏လေးပုံတစ်ပုံတရုတ်အမျိုးသားများအတွက်သူတို့ရဲ့့ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်။ အခုတော့၊နှင့်ဝေးနည်းပါးလာအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်၊အပြေးပြိုင်ပွဲကိုရှာဖွေရန်သင့်တော်သောမိတ်ဖက်နှင့်အနိုင်ရသူမ၏ကျော်မှီအခြားတစ်ယောက်ယောက်ပါဘူးဦးဆောင်ခဲ့ပြီးလူအချို့သွားကြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအတိုအရှည်ကိုရှာပါ။ သူတို့ကအသုံးစရိတ်ကျယ်ပြန့်ခုအပေါ်ဖန်တီးမှု၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်အောင်မြင်သော၊အတိုင်းအနိုင်ရမှအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ အတွက်၊တရုတ်စီးပွားရေးသမားသူ့သတင်းများအရတရားစွဲတစ်ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်မိတ္ဆက္ေအဂ်င္စီပြေရှာတွေ့မှသူ့ကိုတစ်မယားပေးဆောင်ရကုမ္ပဏီသန်းယွမ်(ဒေါ်လာ)ပြုလုပ်ရန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ရှာဖွေရေး။ အခြားကိစ္စများတွင်၊ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာအနေဖြင့်တောင်ပိုင်း၏မြို့တော်ကိုုဝယ်အိုင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တစ်ဦးပီပီအလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်ကိုမှသူ့ရည်းစား။ ကံမကောင်းသဖြင့်၊သူကပယ်ချ၊နှင့်အတူသူ၏အရှက်ဆိုးရွားဖြစ်၏ဓါတ်ပုံများအဖြစ်အပျက်တွေဟာကျယ်ပြန့်နှံ့မျှဝေလူမှုမီဒီယာ။ ၏အစိတ်အပိုင်းပြဿနာသည်အဟောင်းနှင့်အသစ်များ၏လူစည်းဝေးကြသည်မဟုတ်။ အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်ကိုင်။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးခဲ့သည့္အတြက္အခွင့်အလမ်းများအတွက်တည်းဖို့လူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်တစ်ခုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ လူအများစုကခရီးအဆိုပါတိုက္ခန္း၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအတွင်းပွဲတော်များ၊ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောအကြားဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်နင်္လာများအပြားအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလားအလာမိတ်ဖက်။ ဒါပေမယ့်ကာလကြာရှည်အစဉ်အလာအစည်းအဝေး၏အလားအလာမိတ်ဖက်ရှိပါတယ်ပေးထားသောလမ်းကိုခေတ်မှီ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အစာရှောင်ကြီးထွားလာအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊အဖြစ်၊နှင့်စာတိုပေးပို့လီေကဲ့သို့သောထောက်လှမ်းရေးပို။ပိုနည်းလမ်းများကိုသိရန်ရတဲ့၏။ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်လာပို။ထားနဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်အတူအနည်းလမ်းများ၏အနောက်နိုင်ငံများတွင်မကြာသေးမီနှစ်များ၊ေဘာလီပါ။ ငယ်ရွယ်စဉ်မြေးဆက်များပိုပြီးရွေးချယ်မှုနှင့်သူတို့အောက်သူတို့၏စိတ်နှလုံးထက်မိဘများ။။။။ အမြောက်အမြားချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းများစွာနှင့်အတူအမျိုးသမီးအများစုရှိကျေအလမ်းကလူတွေ့ဆုံရန်နှင့်တရားရုံးတွင်တရုတ်နိုင်ငံ။ ဘာလီ၊ အတွက် ပြည်နယ်၊တရုတ်နိုင်ငံ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကမ်းသည်တစ်ခုတည်းနှင့်သာသူမ။ သူမ၏သတိပြုမိခဲ့သည်ထွားလာအပေါ်ယောက်ျား တစ်ခုတည်းသောမြင်ကွင်းစည်းရုံးရေးအဖြစ်အသင်းနှင့်ငှားရမ်းအများပြည်သူဖျော်ဖြေရေးကွင်းအဘို့အချိန်းတွေ့။ အခြားအမျိုးသားများမှလှည့်နေကြတယ်စိတ်ပညာနှင့်င့္ဆံစေဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုပြီးနှစ်သက်စရာ။ နှင့်ရှောင်ရှားရန်ဖန်ဆင်းခြင်းကနေမေးခွန်းတွေစပ်စုမိဘမ်ား၊အချို့တို့သည်အပင်မှနိဂုံးချုပ်ငှားရမ်းအတုဇဥ္တင်ပြဖို့သူတို့၏မိဘများကိုအသုံးပြုလီေထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ငှားရမ်းငါ့ကိုအမည်ဖြင့်။ အစီရင်ခံစာအကြံပြုဌားရည်းစားထိကုန်ကျနိုင်မှ၊ယြမ္ေ(ဒေါ်လာ)။ အဆိုပါပြဿနာများကိုအတွက်အမျိုးသားများအဘို့ရှာဖွေတဲ့အဖော်အများဆုံးလူတန်းစားအတွက်ဆင်းရဲသောကျေးလက်ဒေသများအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားဖန်ဆင်းတော်အချိန်ကြာမြင့်စွာကျင်းပသည့်အစဉ်အလာအကြောင်းခင်ပွန်းဖြစ်ရမည်နိုင်ပူဇော်ဖို့တစ်လျောက်ပတ်သောအဆင့်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးနိုင်မီအဇ။ ေဟာင္ေယန်၊အဘယ်သူသည်ယခုလက်ထပ်၊သူမ၏၊ဖော်ပြဤအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမိ-ယောက္ခမသည်။ ကယ်ချင်အမျိုးသားများလက်ထပ်ဖို့၊အနာဂတ်အမိ-ယောက္ခမမည်ကြောင်းတောင်းဆိုသူ၏ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူသည့်အဝကိုရှေ့တော်၌အိဆွေးနွေးလာမယ့်ခြေလှမ်း။ ဒါဟာရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဘယ်ကြောင့်အိမ်ပြီဒါကြောင့်အားမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊သူမကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီဘဏ္ဍာရေးဝန်အမျိုးသားများအပေါ်အောင်လည်းက အဘို့အခက်ခဲအမျိုးသမီးများစွာလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေ။ ကထပ်ပြောဖို့ကိစ္စ၊နဲ့ကြီးမားနံပါတ်များ၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ငွေကြေးကုန်ကျခြင်း၊လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လက်ထပ်။ အခါသူတို့အခြေချ၊သူတို့မကြာခဏရှာဖွေနေငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး။ အသက်အရွယ်ကွာဟချက်၏နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်ပိုပြီးဘုံရှိပါတယ်တရုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား။ 'ခက်မိန်းမတို့အဘို့ရှာတွေ့ဖို့အသင့်လျော်အမ်ိဳးပြီးနောက်သူတို့နှစ်အရွယ်၊ေဟာင္ေ။ များစွာသောအခွင့်တရုတ်ချင်အမျိုးသားများလက်ထပ်ဖို့ငယ်ရွယ်တော်တော်မိန်းကလေးများ။ အမျိုးသမီး၊အလှည့်အတွက်၊အဘို့အကြည့်ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်သောသင်္ကန်းမျက်နှာသို့အသက်ကြီးကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ပြောင်းပြန်လည်းမှန်သည်။ ကောင်းစွာပညာတတ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးလွတ်လပ်သောသူအမျိုးသမီးများတစ်ကိုယ်ရေနေဟုခေါ်ကြသည်မလို၊ေျပာဟဲလ်မ၊အဘယ်သူသည်လက်ထပ်၊သူမ၏့အဆုံးတွင်ရှန်ဟိုင်း။ မိဘတွေကြီးမားတဲ့အရင်းအမြစ်ဖိအားရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊မကြာခင်မှာ။ သူတို့ကနေအမြဲပစ္စုပ္ပန်၊ေျပာရော်ဂျာရခ်ိန္၊အဘယ်သူသည်ယခုလက်ထပ်ပြီးအသက်တာ၌။ မိဘများကသူတို့တာဝန်ရှိအကူအညီမိမိတို့အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးမိသားစုစတင်၊သူကပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊သူတို့ဖိ မိမိတို့ကလေးကိုရှာတွေ့မိတ်ဖက်၊ချိန်းတွေ့နှင့်ပြင်ဆင်ထားရန်အဘို့အမင်္ဂလာဆောင်။ 'မျက်စိကန်းသောရက်စွဲ၊အရာစီစဉ်မိဘများအားဖြင့်၊ဖြစ်အလွန်ရေပန်းစားနေဆဲ၊ေျပာ တို့၊သူနှင့်တည်း။ မိဘမျက်နှာကြီးမားတဲ့လူမှုရေးဝေဖန်လျှင်မိမိတို့သမီးသို့မဟုတ်သားလက်ထပ်တော့သာမန်မိန်းကလေးတစ်ဦး့မိဘတွေစိတ်အားထက်သန်ပါစေသူတို့ရဲ့သမီးကိုအပေါ်သွားတစ်မျက်စိကန်းသောရက်စွဲနှင့်လက်ထပ်ရမီရောက်ရှိ။ အမြင်ပုံရိပ်ကို၏မိဘများဆင်ပြေယှဉ်ပြိုင်မှာထောင်ရေးဈေးကွက်အမှတ်တရအတွက်ရှန်ဟိုင်း(အကြွေး:)ထိုအဆောက်အဦးအပြင်ထောင်တယ္။ မှာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမှာရှန်ဟိုင်းအသွယ်ထောင့်သည်လွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်မိဘပို့စ်လက်-ကျမ်းစာ၌ရေးထားကြော်ငြာအတွက်မိမိတို့အတစ်ခုတည်းကလေးသူငယ်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသေးစိတ်အဝင်ငွေ၊ပညာရေးနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ အချို့မိဘများရှိသည်လူသိများခဲ့ပြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စျေးကွက်အပတ်တိုင်းအတွက်နှစ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအောင်မြင်မှုရဲ့။ အဆိုင်းအတွက်ဘယ်လိုလူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်နှင့်မည်သို့အမ်ိဳးဝူးမိတ်ဖက်၊အထက္အားလုံးချပြီး၊အကြီးအပေါ်အလေးပေးမေတ္တာထက်လက်တွေ့ဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေး။ ဘာလီ၊ေ ဥပမာအားဖြင့်၊သူ၌အဘယ်သူမျှမအလျင်လက်ထပ်ရန်လိုလားသည်စောင့်သောသူသည်ထိုက်သည်သူမ၏နှလုံးနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အဒီပုံပြင်အခြားသူသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှသင်မြင်ပြီအပေါ်ဘီဘီစီမြို့တော်၊ဦးခေါင်းကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာမျက်နှာသို့မဟုတ်မည္ကျွန်တော်တို့ကိုတွစ်တာပေါ်မှာ။
သင်၏လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့်ရှာဖွေရေးအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ထိုအခါအသစ်ချက်တင်။ ဒီဗီဒီယိုစကားပြောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖို့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနယ်နိမိတ်မရှိဘဲ၊မည်သည့်အချက်အပေါ်။ သာ စကားပြောသင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်စိမ်း၊တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးအ ။ ချက်တင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆယ်ကျော်သက်၊ဒါကြောင့်၎င်း၏ဖန္တီးဖို့လွယ်ကူတက်ဒဏ်ခတ်နဲ့အသိအကျွမ်းဖို့ရှိသည်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများနှင့်ချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ၏အမြို့မြို့၌တရုတ်နိုင်ငံ၊အဖြစ် ၊၊၊၊၊တောပင်များ၊။ အားလုံးတွင်တည်ရှိသည်တစ်ဦးနွေးထွေးသောရာသီဥတုဇုန်နှင့်ထိုကြောင့်လေထု၏အသွင်အပြင်ဆက်သွယ်ရေးအလားအနွေးထွေးစွာနှင့်ဖြေလျော့။ စကားပြောတရုတ်ငါပေးမည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရွေးချယ်ဖော်ကြလိမ့်မည်ဟူသော၊အဖြစ်အလားတူတတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ဆန္ဒကို။ ဒီချက်တင်ပေါင်းစပ်ထားပါသည်လူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂါရပ်များဤဒေသ: တရုတ်နိုင်ငံအလျင်အမြန်နဲ့အလွယ်တကူရွေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအခန်းတစ်ခန်းအတွက်။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဒီအချက်ကကြီးစွာသောအခွင့်အပြောအပေါ်အဓိကကစား၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊အသွားကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက်အတူတကွတရုတ်ထံမှသို့မဟုတ်စကားပြော ။ အဆိုပါမိန်းကလေးများသည်တရုတ်ထံမှအလွန်အဆင်းလှသောနဲ့ယောက်ျားဆွဲဆောင်မှ အခြားနိုင်ငံများ။ ဒါကြောင့်၊ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏သင်တန်းသားများမနန်းမြို့။ အားလုံးပြီးနောက်၊၏နိယာမ -ကစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုင်းသည်အထိနောက်ဆုံးအခိုက်။ သာကိုဆက်သွယ်ပြီးနောက်နှင့်အတူလူသစ်၊သင်သိရှိရာသည်၊သူ့အသက်အရွယ်၊အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအကျိုးစီးပွား။ တရုတ်-ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပျော်စရာနှင့်သိကောင်းစရာများ။ အသုံးပြုသူများအဘို့အစကားပြောသည်သာအရေးပါ၏အရည်အသွေးစကားဝိုင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုး၏န်ဆောင်မှုများ၊အရာသည်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့စုဆောင်းသင်တို့အဘို့အကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုတစ်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏အခွင့်အလမ်း။ ဒီအဗီဒီယိုချက်တင်။ ချက်တင်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့သင်အံ့သြသွားလိမ့်မယ်နှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းကို၊အံ့သြဖွယ်ဂီတ။ ဒီမှာ၊နေ့တိုင်းအသွားထက်ပို၊အသစ်ဖောက်သည်။ ဒါဟာရယ်စရာမိန်းကလေးနှင့်အသိဉာဏ်အမျိုးအသက်ကြီး။ လူတိုင်းတွင်စွမ်းရည်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အမှန်တကယ်အချိန်နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ပီ။ ဒီနေရာမှာသင်ရှိသည်နိုင်တစ်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူဗီဒီယိုကင္မရာ(ကမ်)၊လက်ငင်းစာတိုပေးပို့။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဖို့ဗီဒီယိုကိုပရိုဖိုင်းကတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီး ကိုရွေးညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။
တရားဝင်အဖြစ်လူသိများသည်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသည်အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများတွင်အမြောက်။ ထို့အပြင်၊တောင်ကိုရီးယားရာထူးဒသလောကအတွက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသုံးြ။ ထိုနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားများ၏တဦးတည်းခံစားအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများ၏လူနေမှုအပေါ်အတိုက်။ ဒါကြောင့်၊စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်နေ့စွဲပြည်ပမှာ၊တောင်ကိုရီးယားသည်လက်ျာအရပ်မှာကြည့်ရှုရန်ကြွယ်ဝသောတစ်ခုတည်းယောက်ျား၊ဒါကြောင့်သင်ပေးလိမ့်မည်အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူကိုယ့်ထက်ပိုလူမှုရေးနှင့် အဆင်ပြေ။ အကြံပေးချက်:အဆိုပါကြွယ်ပါတီအတွက်တောင်ကိုရီးယားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချမ်းသာတည်းနေသောအမျိုးသားများအဘို့ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့လက်ထပ်။ မောင်းနှင်မှုအတွက်အစာရှောင်လမ်းသွားအဖြစ်တစ်ခု၏အဓိကအင်ဂျင်များ၏အတောင်ကိုရီးယားစီးပွားရေး၊အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်၊နိုင်ငံရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း။ အများကြီးထွားမှု၏အတောင်ကိုးရီးယားအော်တိုလုပ်ငန်းခဲ့မောင်းနှင်အားဖြင့်တင်ပို့သည်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများအတွက်ပို့ကုန်၊နှင့်အချက်ကိုနေသော်လည်းတင္ပိုကျဆင်းအတွက်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်၊အတောင်ကိုးရီးယားအော်တိုလုပ်ငန်းဖြစ်ဆက်လက်အကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်သူများအတွက်။ ဒါဟာလက္ရွိအဆင့်ပဉ္စမအတွက်ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အဌမ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ ထို့နောက်မှီ၊မူရင်းဆာင်ရွက်မှသာအစည်း၏အစိတ်အပိုင်းမှတင်သွင်းသည့်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၊ယနေ့တောင်ကိုရီးယားေမာ္ေတာ္ကားစက်မှုလုပ်ငန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းပညာလောကအတွက်။ မျိုးစုံကြိုတင်သတ်မှတ်ထားမာ္ဒယ္မ်ား၊ ဆန္ဒသာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဝေါဟာရများအတွက်ဒီဇိုင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၊ဒါပေမယ့်လည်းအမှတ်၏အစအဦး၏အသက်အရွယ်။ အကြားအထင်ရှားဆုံးအတွက်အမည်များကိုအတာ္ကားလုပ္ငန္းအတွက်တောင်ကိုရီးယားဖြစ်ကြောင်းအဝင္၊အာရှပါတယ္၊ေတာင္ကိုရီးေအုပ်စု၊၊ နှင့်အယာဥ္နဲစာအမှတ်တံဆိပ်။ ဒီတော့အခါသင်၌ရှိကြသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသေချာအောင်အောင်မြင်သောလူမှချိတ်ဆက်ထားသောအရာ။ သူတို့အကွာအဝေးကနေအင်ဂျင်နီယာ၊ဒီဇိုင်နာနှင့်အခြားပညာရှင်များအဖို့အလွန်မြင့်မားအရည်အချင်းပြည့်ဝန်ထမ်းများအတွက်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့်စီးပွားရေးအဖွဲ့ဝင်များမှအဆင့်မြင့်အမာ္ေတာ္ကားကုမ္ပဏီများ၊အများအပြားအဘယ်သူစေခြင်းငှါ၊ချမ်းသာကြွယ်ဝ၊တစ်ခုတည်းရှာနေလူမျိုးအဘို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်တွေ့ဆုံရန်။ ကောင်းတစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ၊နှင့်မြှင့်တင်ရေးဆေးညွှန်းနှင့်ဆက်စပ်သောတာ္ကားလုပ္ငန္း။ ဒီေနရာရောနှောနှင့်အတူဧည့်သည်များနှင့်စီစဉ်သူများလျှင်သင်ကံကောင်းများမှာ၊သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုချမ်းသာကြွယ်နှင့်အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့လူမှုဘဝအခံရတိုးချဲ့အကူအညီဖြင့်များ အစာရှောင်ခြင်းလမ်းကြောင်း။ တွေ့ဆုံရန်အကြွယ်ဝသောလူတို့တွင်ကြွယ်သည့်ပွဲ။ တစ်ဦးကဘဏ္ဍာရေးပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးတီထွင်စီးပွားအတွက်အာရှ၊အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်နိုင်ငံ၏အရန်ငွေကြေးစနစ်အပေါ်ပျံသန်း။ အကြီးဆုံးမြို့၊မြို့တော်၊ဆိုးလ်၊ခ်န္ဂင္နှင့်အင္ခ်ဳန္း၊ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်၏ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း။ ထို့ကြောင့်၊ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊တိုင်ပင်၊နှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာများ၊ခြံရန်ပုံငွေ၊အာမခံနှင့်ငွေကြေးမန်နေဂျာတယောက်၏အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်အတွက်တောင်ကိုရီးယားစီးပွား။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စတိုင်အတွက်၊အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုရန်ဖြစ်သည်ရှာသင်တို့အဘို့အလူကောင်းကနေအမြင့်ဆုံးပေးချေလေ့အကျင့်အတွက်၊ကော်ဖီမသောက်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တဦးတည်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေးခရိုင်ရဲ့မြို့။ ၏သင်တန်း၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အချင်းပညာရှင်များ၊အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတစ်ခုတည်းယောက်ျား။ တောင်ဘက်တွင်၊ထိုကဲ့သို့သောဒေသများ အဓိက"နဂါး သြား"ခရိုင်။ မြူးနစ်သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အဓိကဘဏ္ဍာရေးစင်တာ၌ခ်န္ဂင္၊နက်ဖြန် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစင်တာ၊ဦးကြိုပြုခြင်းဖို့အဆင်သင့်အခမ်းအနားဒီဇိုင်း၊နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေး။ တစ်မူထူးခြားသောပြည်တွင်းတွင်ကိုရီးယား၊တမြင်ကွင်းများ၏ဖျော်ဖြေရေးအများဆုံးရောင်စုံအတွက်အာရှတိုက်၊နှင့်သည်၊တကယ်တော့၊အပန်းဖြေဧကမ်းလှမ်း၎င်း၏အကြီးဆုံးမြို့ကဲ့သို့၊ဆိုးလ်၊တောင်ကိုရီးယား;ခ်န္ဂင္၊အင္ခ်ဳန္းဖြစ်နိုငျသောအများအပြားနှင့်နှိုင်းယှဉ်အများဆုံးသီးသန့်အတွက်ပါ။ ဒီဧရိယာ၌၊ ဒေါင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများအိမ်မှအပင်ပိုပြီးဇိမ်ခံဘား၊စားသောက်ဆိုင်နှင့်အစိမ်း။ ဤအရပ်သည်နိုင္ပါျ၊အရာအများအပြားဆွဲဆောင်မှုပုံပြင်အဘို့သင်တို့ဧည့်သည်များအကြောင်းရှာကြသည်သင်ယခုအဘို့အအစားအသောက်တစ်ဦးထူးခြားဆန်းပြားကော့တေးသို့မဟုတ်ပဲခံစားတဲ့အရသာမုန့်ညက်။ ပိုမိုမြဲမြံစေသည့်အတွက်အဆိုပါဧရိယာ၏-ဘား၊အရာအဓိကအားဖြင့်ဆွဲဆောင်ဖောက်သည်များနှင့်အတူ၎င်း၏ရွေးချယ်မှု၏ဂီတနှင့်အချိုရည်။ သို့သော်၊အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးကြော့နှင့် ကြည့်၊အဆိုပါဧည့်ခန်းနိုင်ရာအရပ်ဖြစ်သင်တို့အဘို့အ။ တွင်တည်ရှိပြီးအလျူဟိုတယ္၊ဒီအခန်းကိုအကြောင်း-အဆင့်၊ထူးခြားသော၊ လှပတဲဘို့သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်၊အနုပညာ-ကြက်ဥပုံသဏ္ဌာန်ကုလားထိုင်၊အပေါ်မျက်နှာကျက်။ တစ်ခုထက်ပိုလိပ်စာတွင်ဆိုးလ်မြို့ရှိရာအလှဆုံးနှင့်အကြွယ်ဝဖို့ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤခေတ်မှီဘား-လေယာဉ်ရုံအော်ဟစ်တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းနှင့် ။ အတွင်း၌တည်ရှိသောအကျယ်ဇိမ်ခံအကြားကုန်းဆိုးလ်ဟိုတယ်၊မျက်နှာပါဝင်သည်နှစ်ခုသီးခြားအဖျော်ယမကာနှင့်ငါးပုဂ္ဂလိကအခန်းများ၊အပေါင်းတို့နှင့်အတူအာမခံချက်သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အချို့ရှိအချမ်းသာဆုံးလူတို့အတွက်အဆိုပါမြို့။ မှာအးေပးစက္၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊သခ်ာၤအဓိကေဖ်ာ္ေျဖေရးခရိုင်အခြားသူတစ်ဦးသင်သည်များစွာသောရွေးချယ်မှုများအဘို့အစျေးဝယ်နှင့်ထမင်းစားခန်း။ သို့သော်၊လျှင်သင်ရှာကြသည်အတွက်နေရာကောင်းဂီတတီးဖြစ်ပါတယ်၊ပြီးစတိုင်နှင့်အတူဆိုက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လာကလူအတူတကွတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကျေးဇူးပြုသျှ။ ဒီတော့အခါသင်၌ရှိကြ၏ကိုရီးယား၊ပြင်ဆင်ခံစား၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားတုိး၊ပင်ယူသကဲ့သို့သင်တို့အပြည့်အဝအားသာချက်အများအပြားအခွင့်အလမ်းများသိမှရဖြည့်ဆည်းသင့်ရဲ့သူဌေး၊ တစ်ခုတည်းယောက်ျား။
ကျွန်မဒီစီးပွားရေးအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်။ အဆုံးသတ်မှာ၊ငါရှာဖွေရန်စီမံခန့်ခွဲ ငါအလုပ်ကဒီမှာ၊ဒါကြောင့်ယခုငါမူလစာမျက်နှာမှစ။ (ဒီကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ငါ့ကလေးတွေကိုနေ့တိုင်း။) ကိုယ့်ကိုရှာတှေ့နိုငျအလုပ္ေၾကာ္ျ။ ငါသည်အကြီးထွားလာခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း။ ငါရှာနေတာပါအတွက်၊သင်ရုံသင်။ ငါအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အထူးလူတစ်ဦး၊တစ်ယောက်ယောက်အပြုသဘောနှင့်ပိုအဆင်ပြေမှသုံးပါ။ ပြုံးနေတဲ့သူတစ်ယောက်နှင့်အရသာနှင့်အသက်အဘို့အ။ အသံအလွန် ၊ဒါပေမယ့်ငါကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အ၊ဖြောင့်မတ်ပြီးသစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေ။ ချင်ကြပါဘူး၊ခံစားချက်မပါဘဲသူတို့မျှဝေဖို့ချစ်ကြ၊သူတို့ပဲဖြစ်အရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှု။ ငါအလွန်ကောင်းစွာတို့ နှင့်၊မကြောက်လန့်ပြသရန်။ ့အချစ်သည်နက်နဲသောအရာသည်၊သင်သိလျှင်လူတစ်ဦးမှပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်၊သင်ခံစားရထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်။ လိုခံစားရထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိရပါတယ်။ ညီညွတ်မှန်ကန်အချိန်အတွက်။ ရန်သင့်လျော်မယ့်အစားသူတို့ကမသိဘူး။ သင်အနည်းငယ်။ ပွင့်လင်း၊ရိုးသားခြင်း၊သစ္စာ၊သစ္စာတရားသူကြီးမှအပြင်ဘက်မှ၊ဒါပေမယ့်အထဲမှာရှိတာကိုဝင်ကြည့်၊နှင့်အလုပ်ပြုဘဲတစ်စူပါမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အစစ်အမှန်။ ပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်အကျိုးစီးပွားများ၏ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီ လူအဒရာမာမိဖုရား၊ကျေးဇူးပြုသောသူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်လွယ်ကူသောတည်ထောင်ရန်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ၊သို့မဟုတ်တော်မူသောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်အချိန်ကိုမျှဝေပြီးရထဲကအမွတ္တအတူတူ။ ချစ်ရန်နှင့်ချစ်ကြည်ရေး၊အကျပ်အတည်း။ လစဉ်လတိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏လူငယ်အမျိုးသမီးလာကိုရီးယား၊သူတို့တစ်ဦးတည်းနှင့်သာချစ်သည်နိုးကြား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ကမ်းလှမ်းချက်အပြည့်အဝအကွာအဝေး၏န်ဆောင်မှုများမိန်းကလေးများသည်။ ဤသည်သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးအတွက်တိုးချဲ့န့်အသတ်အီးမေးလ်အကြောင်းဝေမျှခြင်း၊စကားပြောဆိုချက်တွေကို၊ဓါတ်ပုံများကိုလွှတ်တင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများကိုသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်စာသားမည္။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနေစဉ်၊နိုးကြား၊ဆက်လက်တိုးတက်လာဖို့နည်းလမ်းအသင်းဝင်ထွက်သယ်ဆောင်သူတို့ရဲ့အခြေခံမူများ၊ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လဲ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို၊ကျနော်တို့လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုကဖန်ဆင်းသည်။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအနိုင်ပဲ။
အခမဲ့တရုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအခမဲ့တရုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းဆက်သွယ်ကျပန်း က်ပ္အသီးသီးမွေနရာ၏။ တရုတ်နိုင်ငံအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းဖြစ်ကြောင်းအံ့သြဖွယ်စကားပြောရိပ်အဘို့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး။ တရုတ်စကားပြောကွယ်ပျောက်င္ငံတကာနိမိတ်အတွင်း ။ အွန်လိုင်းချက်တင် အခန်းပေါင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်မိတ်ဆွေများကို၊ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊မိသားစု၊ကျပန်းတပါးအမျိုးသား'ယောက်ျားဆိုတာ'မိန်းကလေးငယ်များ၊လူငယ်တစ်ဦးသည်လူနှင့်မိန်းမ။ တရုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းများမှာနေရာမှရှယ်ယာများအမြင်ချင်းင့္တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ထုတ်လုပ်ကြောင်း၊အတွေးအခေါ်များနှင့်နည်းပညာ၊လူနေမှုပုံစံစတဲ့၊အရသာ၊ဝါသနာ၊ယဉ်ကျေးမှုစသည်တို့ကို။ အ သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အသိုင်းအနေဖြင့်ကမ္ဘာစကားပြောအဘို့အတွေ့ဆုံရန်စာသားကျုံး၊စကားသံကိုချက်တင်သို့မဟုတ် ဖစ္သျချက်တင်အပေါ်တရုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ချက်တင်။ တရုတ်နိုင်ငံအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းအသွင်အလှန်အရိပ်များအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ ချက်တင်အပေါ်စကားပြော။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိမိတ်များမှာပျောက်ကွယ်နှင့်ဗြိတိန် ကနေကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများ၊တိုင်းရင်းသားနှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများမှာပူးပေါင်း။ တရုတ်နိုင်ငံ ဖြစ်ကြသောနယ်နိမိတ်-လျော့နည်းကမ္ဘာ မျှဝေသို့မဟုတ်ချိန်းအချက်၊အကြံပြုချက်များနှင့်အမြင်အတွက်အသွင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကွန်ယက်ထဲမှာကျပန်းအများပြည်သူစကားပြောခန်းအပေါ်အင်တာနက်အတွက်အမှန်တကယ်အချိန်အားဖြင့်စာသားအတွက်ဒီပွဲ။
ငါအဘို့အရှာနေပါ၏တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်ကိုးရီးယားအဖြစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။ ဘယ်လိုရှာတွေ့ဖို့ယောက်ျားတွေကိုးရီးယားအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အကောင်းဆုံးအဘို့ရှာယားချိန်းတွေ့။ သို့မဟုတ်ပဲကြိုးစားဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုရီးယားမိတ်ဆွေတွေကိုအွန်လိုင်း။ ပေါ်မှာဖတ်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဆိုက်သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာအတွက်ကိုးရီးယား။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့လီေသို့မဟုတ်ဆိုဒ်များကိုအသုံးပြုကြသည်သောကမ္ဘာအဝှမ်းမှလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ ရှိမရှိအတွက်ပျော်စရာသို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အ-အခေါ်အဝေါ်ကြားဆက်ဆံရေးနောက်ဆုံးမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။။။။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊အကခန့်မှန်းသည်သင်စတင်လိုက်နာရန်ဤလမ်းကြောင်းသစ်။ အောက်ကစာရင်းကိုအမျိုးမျိုးသောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်ပ်များနှင့်အပြည့်အဝကိုးရီးယားကြသူလူအဆင်သင့်တက်ရောနှော။ အောက်ပါဆိုဒ်များမှာရည်ရွယ်ရှာဖွေတဲ့အဖော်ဘယ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုးရီးယား။ အချို့ အလီေအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ယားချိန်းတွေ့ဆိုက်င္ငံျခားသားမ်ားအတြက္၊အရာအသုံးပြုကြသည်၊အထူးသဖြင့်၊အကင္မ္ခ်ီ။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်။ ကိုးရီးယားကင္ယာသည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အတြက္ကင္မ္ခ်ီအကြောင်းကြားအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ပါသည်င္ငံျခားသားေ၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဒါဟာအဓိကတွေ့ရှိရမှာမိန်းကလေးအတွက်ကိုးရီးယားအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နေစဉ်၊အမျိုးသားများအတွက်ကိုးရီးယား။ စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်ပျံ၏အခြားဘက်ခြမ်းမှကမ္ဘာ့အမျိုးသမီး၏အိပ်မက်များ၏၊ထိုအခါကင္ယာ၏အရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဆိုက်အကြားအထူးရေပန်းစားနေသောလူများအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့တောင်ကိုရီးယားမင်္ဂလာဆောင်(ေလက်ထပ်မ်)။ အပိုဆောင်းအချက်အလက်ဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျ။ အခမဲ့အကောင့်ကိုတွင်၊သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ရိုရှာအတွက်အဓိကဂိမ်းနှင့်အတင်းစကားတစ်ခုပေးပို့ဖို့ပေးဆောင်အသုံးပြုသူများ။ သင်မြင်ရလိမ့်မည်အများဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပေးဆောင်ကိုယ္ေ၊သင်ရပါလိမ့်မယ်ပိုပြီးရွေးချယ်ဖို့ရာမှရွေးချယ်မှုများအကြေးပေးသွင်းပေးဆောင်။ မပါဘဲတစ်ဦးမှလွဲ။ အရာသင်ပြီးသားပေးဆောင်မရှိသောဒါကြောင့်များစွာသောမိန်းမ။ ရွှေသို့မဟုတ်လက်တီနမ်အကောင့်ကိုသင်ပေးသည်ပိုတင်ဒေါ်လာလလျှင်။ ပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်ဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျ။ ကိုရီးယားကံကြမ္မာႏိုလည်းအသင့် ဒါမှမဟုတ်အန္း။ လက်လွတ်မမူပါအကောင်းဆုံးအချိန်းအထုပ်နှင့်အတူ။ အကယ္၍ပြည်ပနှင့်အဘို့အရှာဖွေနေအဘို့အမိတ်ဖက်ကိုးရီးယား၊ဤဆိုက်သည်လက်ျာအရပ်။ စိတ်ကိုထားပါကအောက်ပါ:ထိုးက်၊အချစ်အကြောင်းထက်လျော့နည်းလူကြိုက်များယားကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ရှာကြသည်သောသူအဘို့အမိတ်ဖက်အဖြစ်ကိုးရီးယား။ ဒီဆိုက်ကမရမှသာအတွေ့ဆက်ဆံရေးကို၊ဒါပေမယ့်လည်းတက်တွေ့ဆုံရန်နှင့်မိတ်ဆွေများရှာဖွေရန်သင့်လျော်သူများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်။ သင်္ဘောမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့နှင့်အလွန်ဆင်တူအခမဲ့ကင္ယာ-ကိုးရီးယားအကောင့်ကို။ ယံအသုံးပြုသူအမည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အခမဲ့အကောင့်ကို။ အသစ်တစ်လုံးသည်အလွန်မြင့်မားအကြံပြုလျှင်သင်အလေးအနက်အဘို့အရှာဖွေနေယား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့။ ကိုးရီးယားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးကိုရီးယားချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုအခမဲ့အဘို့ပေးသည်အလွန်အသေးစိတ်အချက်အလက်အကြောင်းအသီးအသီး၏တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ ပရိုဖိုင်းသို့သွားကြသောအသေးဆုံးအသေးစိတ်နှင့်အချိန်အများကြီးကြာမှသူတို့ကိုဖြည့်စွက်ထွက်။ ဤတစ်အများကြီးပိုပြီးလေးနက်၏ဗားရှင်း သို့မဟုတ်အခြားအခမဲ့ချိန်းတွေ့။ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အတူ၊သင်အားဖြင့်အဆင့်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်။
အင့အယံုအချို့နှင့်စိတ်ပျက်အခြားသူများများအတွက်။ အယားကိုကျေနပ်လူအပေါငျးတို့သအမျိုးမျိုး၊နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးခံစားနိုငျသောစကားပြောဆိုမှုအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ မှာအချို့သောအမှတ်ေရးခဲ့ပိုဖြစ်လာပြီးအချင်းချင်းပိုပြီးရေပန်းစားအားလုံးကိုးရီးယားပိုက်ပါတယ္။ အက္ပ္အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ထိုသို့အရေးပါသည့်အတွက်အာရုံစူးစိုက်အစည်းအဝေးကနေသူလူမှာအကောင်းတက္ကသိုလ်နှင့်ကောင်းတစ်အလုပ်။ ကတည်းကဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်အဖြစ်ချိန်းတွေ့ဤလောကအတွက်တောင်ကိုရီးယား။ အမျိုးသမီး(ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများအသက်မှတက်ရန်သင်အလွယ်တကူစာရင်းသွင်း ဒါပေမယ့်သာယောက်ျားပူးပေါင်းနိုင်လျှင်သင်သက်သေပြနိုင်ပါကြောင်းများတက်ရောက်ဂုဏ်သိက္ခာတက္ကသိုလ်တွေ၊သို့မဟုတ်ရှိသည်သောတစ်ဦးကောင်းအလုပ်အဖြစ်ဆရာဝန်၊ရှေ့နေများ၊စသည်တို့ကို။)။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်မတစ်ဦးချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုကြီးပိုပြီးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရှာဖွေကိုးရီးယားမိတ်ဆွေသည်အွန်လိုင်းဘာသာစကား-အခြေခံချိန်းတွေ့ဖလှယ်ကျော်ကော်ဖီခွက်၊သို့မဟုတ်အကြောင်းပြောနေတာ-။ အလီေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးပြုကြသည်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့၊အဖြစ်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း၊ဒါပေမဲ့သူတို့ပြီးသားရှိသည်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုပေးမႈ၊ခွင့်ပြုသောအသုံးပြုသူများသုံးစွဲဖို့အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်။ လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အမျိုးအစားများအတွက်ကိုးရီးယားအွန်လိုင်း(သို့မဟုတ်မိန်းကလေး)၊သို့မဟုတ်ပဲအခြားအက်ပ်ရဲ့နောက်တွဲယာဉ်အတွက်ကိုးရီးယား၊ဒါကြောင့်သေချာအောင်သင်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတွက်တောင်ကိုရီးယားသွားဖို့အရက်စွဲသည့်အပေါ်မြှင့်တင်ရေးအသာရွေးချယ်စရာ၊သိသိသာသာ။ မြှင့်တင်ရေးအတွက်တောင်ကိုရီးယားကိုနေဆဲအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုင္ငံျခားကကင္မ္ခ်ီ၊သို့သော်ဤသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲ။ အများဆုံး အုပ်စုကြီးတစ်စုနှင့်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများအတွက်တောင်ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ)အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ဆရာမဒါမှမဟုတ်စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များ။ ဟဲလိုပြော၊ဒီအအတိအကျမအနေနဲ့အက္ပ္ကိုအစည်းအဝေး၊ဒါပေမယ့်အအက္ပ္ကိုေသင္ယူကိုးရီးယားစာ၊အွန်လိုင်း၊အကြီးဆုံးကမ္ဘာအတွက်။ ဤသည်ကြီးစွာသောလမ်းမှဖြည့်ဆည်းယားသူငယ်ချင်းများအွန်လိုင်းနှင့်ကိုရီးယားသင်ယူပါ။ အများအပြားရှိပါတယ်ကင္မ္ခ်ီသူအသံုးျပဳရန္အက္ပ္သူတို့ရှိသည့်နေရာအတွက်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသင်ယူခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း၊နှင့်သင်တစ်ဦးဆုရှင်အတွက်နှစ်ဦးစလုံး။ ဒီဖွင့်ရန်နေရာကောင်းဖို့ရှာဖွေနေကြသောအခါနှင့်အတူစကားပြောကင္မ္ခ်ီ။ ဆင်တူပါတယ်နှိုးဆွ၊ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ သာသလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာနဲ့စတင်အားဖြင့်စကားပြောဖို့အမျိုးသားများအပေါ်ပလက်ဖောင်း။ ဤအက္ပ္ကိုသင်တို့အဘို့အသည်စုံလင်သောသူအမျိုးသမီးအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးကိုတစ်ဦးသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များကြီးနှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အမှား။ ကြသောအခါအနက်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ကိုးရီးယားအဖော်၊သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပင်တွေအများကြီး အစေ့'။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချို့လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ်ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးသင့်ပရိုဖိုင်း၊ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုကနဦးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ခြေရာခံဖို့ကိုဘယ်လိုနှင့်အမိန့်သင်ပထမဦးဆုံးသတင်းစကားများအစည်းအဝေး။ မာရီသည်အဘယ်လ်ဂျီအကြောင်းဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ဒီဇိုင်နာတွင်အခြေစိုက်ဆိုးလ်(အာဖရိက)။ သူမလေ့လာမှုများရဲ့လမ်းညွှန်မှုအပေါ်ခရီးသွားလာခွင့်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်။ ပူးပေါင်းမာရီသာသူမ၏သုတေသနရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနေရာအတွက်ခရီးသွားရီးယား။ စေမာရီးယားသည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအမေဇုံ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအရင်းအပေါင်းအသင်း၊တွဲဖက်ကြော်ငြာခြင်းအစီအစဉ်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအဖို့နည်းလမ်းငွေရှာကြော်ငြာနှုန်းထားများအားဖြင့်ကြော်ငြာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအမေဇုံ။ ဒီမာရီကနေရီးယား။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။.
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာတစ်ဦးတစ်ရောနှော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများသည်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ရှာဖွေနေများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အနည်းငယ်အွန်လိုင်း ၊သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ထွက်သွားနှင့်အတူ။ စတင်စည်းအဝေးတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်တရုတ်နှင့်အတူယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့အွန်လိုင်းဦးခ်င္းနှင့်တရုတ်စကားပြော။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အပြည့်အဝတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေရက္မ်ား၊မိတ်ဆွေတို့ကို၊အခင်မင်၊နှင့်ပျော်စရာ။ သူတို့ကိုရှာဖွေတာကလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူလုံးဝအခမဲ့တရုတ်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်ကြည့်ရှုရန်အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများအတွက်ရရှိနိုင်ဘေဂျင်းတစ်ဦးတစ်ယောက်၊တက်ချိတ်အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းလုံးဝအခမဲ့တရုတ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ စတင်ချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာယနေ့။ ရှာဖွေနေကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမှရက်စွဲနှင့်အတူတကွအမှုတို့ကိုပြု။ သူမဖြစ်ရမည်အချစ်ကြဟာသတစ်ခုဥာဏ်ကောင်းသော။ ကြိုက်မှနမ်းပွေ့။ ငါချက်ပြုတ်နှင့်ဥယျာဉ်။ လိုရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း။ မင်္ဂလာပါ။ ငါတော်တော်ကြီးနေအိမ်မှာ၊ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲမထားပါဘူးပေါ့။ ငါ၏အလှုပ်ရှားဆုံးအချိန်။ အားလုံးထက်သင်သိချင်၊ကိုယ့်ကိုမေး။ ဘယ်မှာမှ။ ကောင်းစွာပါ။ ငါဖြစ်၏သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့ကြိုက်ပျော်သွားသဖြင့်ဘိုးလင်း၊ဂေါက်သီးနှင့်ယူပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ပင်ပေါ်ကောင်းတဲ့ရက်ပျော်ပွဲစားရှိသည်။ ငါလိုသူရေကူး၊ပုံဆွဲ၊ပုံချက်ပြုတ်။
ရဲ့ပျော်မွေ့ပါစေချက်တင်အသစ်ကိုတောင်ကိုရီးယားချက်တင်အပေါ်တောင်ကိုရီးယားအွန်လိုင်းချက်တင်၊တောင်ကိုရီးယားနှင့်အတူ၊ဝက်ဘ်ကမ်။ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊တည်နေရာ။ မိသားစုအရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းသင်သည်သင်၏အသက်တာ၏၊တောင်ကိုရီးယား၊နှင့်သင်အတွေ့အကြုံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အစဉ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်သွယ်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှယား။ ဒီနေရာမှာသင်၏အားသာချက်ယူနိုင်အထူးအကမ်းလှမ်းချက်-တောင်ကိုရီးယား-စာသား၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တောင်ကိုရီးယားစကားပြောအဖြဲနိုင်ငံခြားချက်တင်နှင့်အတူလူငယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊စခန်းနှင့်အတူစကားပြောလူတွေရဲ့အချစ်၊ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများစွဲရီးယားနှင့်အများကြီး၊အများကြီးပို။ စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏တောင်ကိုရီးယား၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်၎င်း၏လူမ်ိဳးဖစ္စဥ္မွာဖွဲ့စည်းမှု(ဆဲပါဝင်သည်ပင်နီးစပ်ဆုံးတရုတ်။ အသက်တာ၏အရိပ်လက္ခဏာချစ်ကြည် ပင်နက်ရှိုင်းထက်အဘယ်အရာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ခံစားချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးလျှင်၊ဒါကြောင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်၊နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်များ၏ရိုးသားမှု၊တရားမျှတမှုနှင့်နားလည်မှု။ မေတ္တာကြောင့်အန္တရာယ်ကိုလည်းမရှိ၊ဖြစ်လာ၏တစ်ဦးအစွဲအလန်းပေမယ့်နေဆဲအဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအနှုတ်တတ်၏။ တကယ်ပါပဲ၊ခင်မင်သည်ဘယ်တော့မှအခြားအရာတစ်ခုခုမျှဝေဖို့၊လူ၊သင်တို့၏တရားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တွေ့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ကိုးရီးယားအရပ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်သူတို့ကိုသင်ပေးပါ။
ချက်တင်အတောင်ပံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်၏လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အချိန်ကိုက်လုပ်နိုင်ဖို့အကောက်ခွန်အက်စ်အန်းဒရွိုက်။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါတယ်နှင့်အသစ်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့်တီအင်အားအပိုအင်္ဂါရပ်တွင်။ ရှိနေဆဲအတွက်ပြီးပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုများသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းစကားပြောနေစဉ်တောင်ပံအင်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်။)အသုံးပြုထားတဲ့အမည်မသိနှင့်အတူစကားပြောဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းယခုကဲ့သို့။ ဒါဟာအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်စကားပြောနေစဉ်ခရီးသွားလာတူသာမြေနှင့်ဘတ်စ်ကားများ။ ဤအက္ပ္ကိုအလွန်အံ့သြဖွယ်အင်္ဂါတူဖိုင်မျှဝေခြင်းနှင့်ဆွဲ။ အတွက်နှင့်အတူစကားပြော၏အနီးအနားလူသိများနှင့်အမည်မသိလူတစ်ဦးမပါဘဲမည်သည့်အင်တာနက်နှင့်အချက်အလက်စွဲချက်ကိုအသုံးပြုနီးသက်တူရွယ်တူ။
ကိုရီးယားကျွမ်းနှင့်အတူသီးနှံများ၊မည်သို့ရှာတွေ့မှ ။ သို့မဟုတ်မစ္စစ်။။ညာဘက်အပေါ်၊တောင်ကိုရီးယား။ ယဉ်ကျေးမှု၊နှင့်ကိုးရီးယား
ပြီးနောက်ရှစ်ပို့စ်များအပေါ်ပိုယ်(ကိုရီးယားအစားအစာ)ဘလော့)မွာတစ်ချိုးယူပြီးအပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့အခြားခေါင်းစဉ်။ အခါအရေးအသားအကြောင်းကဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုရီးယားလမ်းကြောင်းအတွက်မင်္ဂလာဆောင်ဆက်ဆံရေးကို၊ငါလက်ခံရရှိတာင္းရေးသားဖို့ပိုပြီးခေါင်းစဉ်အပေါ်စာတန်၏။ ဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်၊ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်နည်းအတွက်တနေသောသင့်ဂစ္။ သို့မဟုတ်လွဲချော်ဖြစ်ပါသည်။ နည်းလမ်းများအချို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့နဲ့ထူးခြားတဲ့အတွက်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှု။ ကိုးရီးယားယဉ်ကျေးမှု၊အစဉ်အလာများထောင်၍အခိုင်အမာအမြစ်တွယ်လျက်၊ကွန်ဖြူးရှပ်အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှုများကိုရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးမ အလွတ်လပ်လပ်ရောနှောအခြားသူများနှင့်အတူ၊ဒါကြောင့်ထောင်ဖွဲ့စည်း အားဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ လက္ရွိအတွက်၊နိုင်ရန်အတွက်ကိုရီးယားမှအာဖရိက၊အသင်သည်၊သင်၏မိတ်ဆွေများ၊မိဘများနှင့်မိသားစုဝင်များ၊မိတ်ဆွေများကို၊မိသားစုကို၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အေဂျင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၊သင်၏သတင်းရင်းမြစ်များသတင်းအချက်အလက်သည်သင်တို့ကိုကူညီရှာဖွေဦးသို့မဟုတ်မစ္စစ်။ အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက်တ။ သင်၏အဆွေခင်ပွန်း၌ကိုးရီးယား၊အကြောင်းအဖွင့်အဘယျသို့သင်တို့အဘို့အသွားကြသည်?? (တူညီသောအင်္ဂလိပ်အတွက်အတိုင်းအစည်းအဝေးများအနေနဲ့ဗမာစကားလုံး)၊ဤအမှုအရာကိုဆိုလိုသည်သွားရန်အစည်းအဝေးဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာချက်။ ေတာင္ကိုရီးယား၊အစည်းအဝေးကိုရည်ညွှန်းသည်အစည်းအဝေးကိုလူတစ်စုဖြစ်တယ်၊ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုနည်းလမ်းအတွက်အားဖြင့်မျက်နှာအငယ်မျိုးဆက်။ လူငယ်တစ်ဦးသည်လူနှင့်မိန်းမငယ်တစ်ဦးရှိသည်ဖိတ်ခေါ်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အုပ်စုတစ်စုမှာသတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာ၊အများအားဖြင့်တစ်ဦးကဖီးသို့မဟုတ်ဘားတန်း။ အဆိုပါအစည်းအဝေးအပေါင်းတို့သည်မဟုတ်စံသို့မဟုတ်အမှတ်စဉ်၊ဒါပေမဲ့အုပ်စုကိုကိုင်ထားနိုင်သူတို့ကို ညနေခင်းများဂိမ်းကစားခြင်း၊သောက်နှင့်စကားပြော၊ဒါမှမဟုတ်သွားအုိေအခန်းမှသီချင်းဆိုမည်။ သင်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေလျှင်၊သင်ကဲ့သို့၊သင်ကအမည်ပြောင်းကိုစတင်ရက်စွဲသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်။ အတွင်းအစည်းအဝေးနှင့်အတူအများစုကဆွဲဆောင်မှုယောက်ျား၊သင်ရနိုင်လိမ့်မည်အာရုံကို၏အမျိုးသမီးအများစုဟာ၊နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဒီစာသားအဆိုလိုတယ်သည်ထံမှစာတစ်စောင်အရှငျဘုရငျကို။ ဒါကြောင့်သင်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်ထင်၏နာမတော်ကိုအမျိုးသမီးကို၊ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အုပ်စု၊စာသားအတိုင်း၊ဆိုလိုတာကကတ်သည်မိဖုရား။ သိပေါင်းစပ်ကိုရီးယားနှုတ်ကပါဌ်နှင့်စကားလုံးမှဆင်းသက်လာသောနောက်ဆုံးအသံ၏အဘိဓါန္ဗမာအစည်းအဝေး။ ဤသည်မျက်စိကန်းနေ့စွဲစီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်အလှန်။ မှာပါတဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတစ်ယောက်ကိုသိ၊နှင့်သင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားသွယ်သို့ဆောင်ခဲ့အသီးအသီးအခြားသို့ချစ်ကြည်ရေးကော်ဖီဆိုင်ကို။ မိတ်ဆက်ဖို့သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အသီးအသီးအခြား၊နှင့်အလေးနှင့်အတူသာယာသောစကားပြောဆို။ ပြီးနောက်၊အ သွားပြင်ပမှာချန်ထားမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အဆက်စကားပြောခန်း၊တစ်သွယ်။ လျှင်သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ကြတယ်သီးအသီးအခြား၊သင်တို့သည် သငျသညျမှနျသှားနိုငျအရက္ေရုပ်ရှင်ရုံမှစတင်နေ့စွဲ။ သောကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့်အတူကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်အဝါ၊ကင္မ္ခ်ီအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အင်တာနက်မှရှာဖွေနည်းသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသူမှန်ခဲ့သည်။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်ခန့်မှန်း၏ပုံစံအတွက်ပေါင်းစပ်စကားလုံး၊ကိုရီးယားသတင်းစာတစ်ခွန်းမှသိမ်းယူခဲ့သည့်အသံ၏အဘိဓါန္ဗမာအစည်းအဝေး။ တကယ်တော့၊ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်တစ်ဦးမြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ချိန်းတွေ့သောအလိုအလျောက်စီစဉ်အားဖြင့်လူနှစ်ဦးအင်တာနက်ကိုကျော်သို့မဟုတ်စာအုပ်တစ်အုပ်။ အတူသင်၏စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုအတွက်တောင်ကိုရီးယား၊လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုကိုလျှောက်လွှာ(မွားမ်ားအက္ပ္ကို)တီထွင်ခဲ့ပြီးကတည်းကအလည်ကူညီရန်အတွက်အစည်းအဝေး၏အမျက်။ အမွားမ်ားအက္ပ္ကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ရှာတွေ့၊ဝင်ပြီးနောက်အချက်အလက်အကြောင်းအမျိုးအစားလူတစ်ဦး၏သိချင်တာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊အခန်းငါစတင်ရန်အဘို့အရှာနေ့့အတွက်အနှစ်။ ပေးဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အခကြေးငွေအဘို့အဘယ်အရာကိုသင်အနိုင်ရ၊ပြီးတောင်းဆိုဖို့ရှိသည်စုစုပေါင်းတစ်သန်းဒေါ်လာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဝင်။ အားလုံး၎င်း၏သင်တန်းသားများကိုနေ့စဉ်ရရှိတဲ့များကမ်းလှမ်းအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းနှင့်ပေး၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်ကောင်း၏ဂိမ်းအတွက်၊သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာတွေ့တဲ့လူသား။ အခြားကုမ္ပဏီများ၊ပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်များ၊ေလ့လာလျှောက်လွှာခေါ်"မင္းတံတား"၊ခွင့်ပြုသောအသုံးပြုသူအဆွေးနွေးရန်ဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်းနှင့်အတူအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။ ကိုကိုက္ညီသမ်ထောက်ပံ့ရဲလ်-အချိန်ဖုန်းစကားပြောမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊နှင့်အသင်သည်လည်းအကြံပြုသည့်အကြောင်းအရာအဘို့စကားပြောဆို။ တစ်ခါပြီးစကားအပြန်အလှန်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပါတီများ၏အကြားသူတို့ကိုနေရာယူ။၊၏လဲလှယ်ပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များ။ ဘွတ်ကပိုပြီးသင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းကိုများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးကတည်းက၊ဒါကြောင့်နေရာယူနိုက်ကလပ်အတွက်(ကိုးရီးယားမှာအစဉ်အလာနှုတ်ကပတ်တရားတော်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊တစ်ဦးညဥ့်ကလပ်အတွက်ရိုးရာကင္မ္ခ်ီ၊အပြင်အနောက်တိုင်းသူများ၊အတန်း၏စားပွဲရှိရာစြဲ၍ထိုင်ပြီးစကားပြော၊အဖြစ်တစ်ဦးအရိပ်ကြောင်းအတော်လေးသေးငယ်သည်၊တစျခြိနျ၊ဖောက်သည်များ၊နှင့်အမ သူတို့သွားအကအခုန်အထပ်ရှိပါတယ်။ မကြာခဏယောက်ျားမှာထိုင်စားပွဲနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်စပျစ်ရည်၊အသီးစျေးကြီးသည်။ သူတို့တာဝန်၏ဝန်ထမ်းကအဆိုပါဗျူရို၏၊အဘယ်သူသည်အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှအမျိုးသားများ၊စားပွဲပေါ်မှာမှရှာဖွေရန်အုပ်စုတစ်စုသောသူအမျိုးသမီးသွန်သင်ဖို့သူတို့ကိုအပေါ်အစီရင်ခံပြည်နယ်အမျိုးသားများရဲ့ဇယား။ အထွေထွေအတွက်၊ပိုကြီးကိုပူဇော်။၊အပိုလှပတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရလိမ့်မည်။ တစ်ဦးလျှင်လူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား၊သူတို့ကလိုအပ်သောအလဲအလှယ်ဆက်သွယ်ချက်၊နှင့်သင်နှင့်အတူစတင်။ ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဘွတ်ကင်၊နှင့်အပစ္ဆိုစောင့်ရှောက်နိုင်စာရင်းများဖုန်းနံပါတ်များ၏ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီး၊ငါသည်သူတို့ကိုခေါ်နဲ့သူတို့ကိုပူဇော်ခြင်းအချိုရည်များအတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်အလွန်စျေးပေါသော၊နှင့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မိတ်ဆွေများနှင့်။ အမ်ိဳးသုံးဖြုန်းဖို့တတ်နိုင်၊ဝင်ငွေသူတို့တစ်ဦးစီအတွက်အဖံုးနှင့်အကြံပေးချက်များများအတွက်ဘွတ်ကင်အတွက်ကလပ်အထိနှောင်းပိုင်းမှာညဉ့်။ ဗီဇာအချက်အလက်တွေမောင်းနှင်ခြင်း၊မင်္ဂလာဆောင်၏ပါဝင်သည်ဟုတစ်သွယ်၊နှင့်များသောအားဖြင့်အစမိဘ။ သင်မြင်ပြီအပေါ်ကိုရီးယားရုပ်သံရှိုး၊မိဘများအတွက်မေးတဲ့အသွယ်များအတွက်၊မိသားစုမိတ်ဆွေတစ်ဦးအားကြီးသော လူမှုကွန်ယက်ကိုကူညီရန်အကြံပြုသင့်တော်သောမိတ်ဖက်များ၏သားသို့မဟုတ်သမီး၊အနှစ်သုံးဆယ်ကြာ၊ဒါပေမယ့်မနှင့်လက်ထပ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ရည်းစားသို့မဟုတ်ကျေးဇူးတင်။ ဒီနည်းလမ်းဟာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်အပေါ်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏မိဘ၊သူပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦး၏အနည်းဆုံးတစ်သူတို့ကိုမှလုိုက်မိမိတို့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပုံမှန်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေ။ အစည်းအဝေး၏ဤအစုံတွဲ၊အဘယ်မှာသင်ကြိုးစားဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပိုကောင်းသိ။ သူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား၊သူတို့ကမျှဝေသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်း။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကမကြာခဏဖိအားကနေမိဘတွေလက်ထပ်ရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့၊အထိမ္းအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့အတွင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲလအတွင်း၏ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး။ ကတည်းကအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်များမှာအောက်၌တဦးတည်း၏ထိန်းချုပ်မှုကိုမိဘများရှေ့မှာပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး၊အနီးစပ္လာမိသားစုအမည်ကိုဆန့်ကျင်သောထောင်ရေးနိမ့်သည်။ အကယ္စုံတွဲဆက်လက်သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်၊သူတို့လျော်ကြေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်၊အများအပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်း အေဂျင်စီများတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်မိတ်ဖက်မှတောင်ကိုရီးယား။ ဥပမာအားဖြင့်၊အတွက်နှစ်လုံးပဲရှိပြီး၊အဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ခံအဖွဲ့ဝင်ကြေးများအကြားယူရိုသန်းနဲ့တစ်ယူရိုသန်းသာဝင်ငွေအပေါ်မူတည်ကြောင်းန်ဆောင်မှုများအဆိုပါနှစ်လုံးအဖွဲ့ဝင်များလိုအပ်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအတွက် အသုံးပြုကြောင်းနည်းလမ်းတစ်ဦးပိုပြီးစနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု၏အားလုံး၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦး အတွက်အသီးအသီးအဖွဲ့ဝင်အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးသင့်အိမ်ထောင်ရေး၊ပညာရေး၊ငွေနှင့်ကြွေးမြီ၊အမြင့်၊အလေးချိန်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်သောက်ရေအလေ့အကျင့်၊အလုပ်အကိုင်၊ဝါသနာနှင့်မိသားစုသမိုင်း(အပါအဝင်အလုပ်အကိုင်နှင့်ပညာရေး၏မိဘများ)အတူလိုအပ်သောသက်သေအထောက်အထားမှတ်တမ်း၊နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအတိအကျလူတစ်ဦးအဘို့အရှာကြသည်ကိုအသုံးမပြုခင်၊ကွန်ပျူတာမှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်အဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူအလားအလာမိတ်ဖက်။ အပေါ်အခြေခံပြီးအဆိုပါနှစ်လုံးရဲ့ဒေတာ၊သက်ဆိုင်ရာတင်ပြဝင်အဖွဲ့ဝင်များ၏အဖွဲ့အစည်း။ အချို့ဂျင်စေခြင်းငှါလည်းဖြစ်နိုင်လိုက်လျောညီထွေမှသင် ပါတီများအတွက်စုံတွဲများနှင့်တစ်ဦးတစ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်လုံးစီစဉ်ပေးတဲ့အောင်သွယ်အစည်းအတွက်ဟိုတယ်ရှိရာအကယ္၍ခွဲခြားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသားများမှစ၍စားပွဲမှစားပွဲပေါ်မှာအဖြစ်၊လူတိုင်းမအခွင့်အလမ်းကိုပြောဖို့တခြားလူတွေ။ တိုင်း၏အဆုံးမှာနာရီ၊အသီးအသီးပါဝင်ပေးအပ်တစ်ကဒ်-ယနေ့အချိန်တွင်၊အဘယ်မှာရှိခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုတဲ့လူအရေအကြိုက်ဖြစ်အတူတူ။ အပြင်တောင်ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းအတွက်၊အမှန်တကယ်ရှိပါတယ်များစွာကွဲပြားခြားနားသတင်းရပ်ကွက်ထံမှသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ပြီးသောသင်၏သခင်သို့မဟုတ် ။ အမှန်။ ဒီတော့ရချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစား၊သငျသညျကြိုးစားနိုငျသောစာလုံးတွေအဖြစ်အထက်။ ကံကောင်းပါစေရှာတွေ့ ။ သို့မဟုတ် ။။ -ဒံယေလတော့၊တောင်ကိုရီးယား:တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အကြောင်းသည်မဖြစ်နိုင်ကျို၏၊မောနှင့်စင်ကာပူ:ထုတ်ဝေသူ ။
ကြောင့်ရြယ္ႀသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံကုလသ။ သတင်းအဌ '
എന്തിനാണ് ല്ല. അതേസമയം, വിവാഹം ചൈനീസ് ഗേൾസ്
ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက် အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ဒေါက်ချိန်းတွေ့ ၁၈ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရွေးချယ်စရာ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းစစ်ဆေး
© 2021 ဗီဒီယိုက ချက်တင် တရုတ်နိုင်ငံ